Masoo Gaadhay Gaal iyo Wadaad Gaadh Uwada Taagan? | maktabadda | Af-Soomaaliga
Category Archives: Masoo Gaadhay Gaal iyo Wadaad Gaadh Uwada Taagan?
Qeybta 50aad: Dhammaad
13/03/2014 Masoo Gaadhay Gaal iyo Wadaad Gaadh Uwada Taagan?Abuu Ibraahiimmaamule
Ikhwaanii waxaan kala tagnay ayadoo meel walba nalagasoo galay. Waxay ahayd arrin Allaah ku kala saarayo mujaahidiintii dhabta ahaa iyo munaafiqiintii murjifiinta ahaa. Waxaa gaaladii haleelay ama raacay shayaadiintii ama jawaasiistii. Siyaabo kala gaddisan ayay gaaladu u wadatay jawaasiisteedii. Shariif oo ahaa hoggaankii ugu sarreeyay mujaahidiinta waxaa lagu qaatay diyaarad asaga oo ku sugan agagaarka Dhoobley.
Axmed Madoobe waxay qaateen asagoo dhaawac ah. Waxaa gaaray dhaawac culus. Dhaawucu wuxuu ugu dhacay si kama’ ah oo aan ula qasad ahayn. Maxaa yeelay asaga ayaa hagayey diyaaradaha iyo madaafiicda meelaha fogfog lagasoo ganayay, sida xogtu sheegtay. Madfacii loo waday mujaahidiinta ayaa ku habsaday jaasuuskii Axmed Madoobe iyo mujaahidiin kale.
Mar hadduu jaasuusnimo iyo gaalnimo aqbalay awalna khayr ma lahayn. Alla ha dulleeyo. Waxay qaateen dhaawiciisii markaasay Adis Ababa ku daawaysteen markuu biskoodayna waa kuwii kusoo celiyay mujaahidiintii oo baraarugay. Doqon.
Waxaa la yiri been waa lagu cabbaa laakiin laguma rakaato. Waxay kusoo celiyeen Xamar asagoo u dallacay xilmadhibaan kana tirsan kooxda riddowday ee Shariif madaxda u yahay.
Waxaa kala siibsiibtay wixii ku haray mujaahidiinta dhexdeeda oo jawaasiis ahaa. Waxaa Ilaahay faraj u furay oo ka badbaaday cadawgii dhiigga u oomanaa mujaahidiin aan badnayn. Waxay guda galeen mujaahidiintii inay israadsadaan illeen waxay ku kala firireen dhulkii hawdka ahaa. Waxaa is helay rag aan badnayn. Waxaa la galay abaabul iyo in mar labaad boorka la iska jafo illeen gobi waa liicdaa ee ma jabto. Muslimku waa gob hadduu Alle talosaarto.
Mujaahidiintu waxay soo mareen marxalado kala gaddisan oo loogu gaystay dhibaato ayaga iyo camalkii ay wadeen (jihaadkii). Waxaan soo marnay Ictisaam oo loo aaminay inay noqdaan hoggaanka mujaahidiinta. Waxay khiyaameeyeen mujaahidiintii aakhirkiina Ilaahay waa fashiliyay oo waatay mujaahidiintu ka taxafudeen (maamul gooni ah).
Mujaahidiintu waxay haddana aamineen culumo kale oo ay is lahaayeen sidii daahirkooda ka muuqatay waa rag fiican (Shariif, Janaqow iyo saaxiibbadood). Waad ogaydeen dhibaataday sameeyeen oo magaaladii mujaahidiintu qabsadaanba waxay u dhiibi jireen mooryaan ka liidata kuwii laga qaaday (qabiil iyo jihaad-diid miiran).
Maantay waxaan maraynaa khayaamadii ugu foosha xumayd uguna khasaaraha badnayd oo mujaahidiinta loo gaystay. Gaaladii markii laga adkaaday ayay munaafiqiintii waxay dhabarjabiyeen mujaahidiintii si gaaladu fursad ugu hesho inay mar labaad soo qaaddo dagaal rogaalcelis ah oo ay mujaahidiinta ku dabargooyso. Waxaa falkaas sameeyay Shariif, Indhacadde, Axmed Madoobe iyo ciidammadii la shaqaynayay oo munaafiqiintaas ama jawaasiistaas aan kor kusoo sheegnay hoos imaanayay ama ka amar qaadanayay.
Mujaahidiintu waa dahab ceeriin ah. Dahabku markuu ceeriin yahay wuxuu wataa qashin iyo daxal korka ka saaran. Waxaa lagu dhalaaliyaa dab aad u kulul. Waxaa mar labaad lagu celiyaa dabkii si loo helo dahab nadiif ah. Mar saddexaad waxaa lagu xaqiijiyaa dab intii hore oo dhan ka kulul si loo hubiyo inuu dahab xaqiiqo ah yahay. Markaasaa waxaa lagu fiiriyaa qalab muujinaya bidhaanta dahabka dhabta ah. Intaas oo marxaladood markuu soo maro dahabku ayaa suuqa la keenaa si aan ceebi usoo gaarin sumcadda ganacsadaha.
Haddaad akhridaan Suuratu Tawbah waxaad ogaanaysaan in Allaah uu mujaahidiinta ugu baaqay inay naftooda uga gataan Janno. Waxaan soo aragnay suuqii makhluuqa ama banii-Aadamka oo badeecaday gaynayeen suuqa ka taxaddaraya si aysan ceeb u yeelan ama sumcaddiisa ganacsi aysan hoos ugu dhicin wuxuu suuqa gaynayo. Miyaysan habboonayn badeecada Khaaliqa Jannada looga gadanayo in laga taxaddaro?
Jihaadku waa camal aad u dhib badan aadna u ajar badan. Jihaadka Ilaahay ayaa isku laasimiyey inuu kala saaro kuwa dhabta uu ka yahay iyo qolada beenta sheegaysa. Qur’aanku wuxuu leeyahay qayba dhan oo jihaadka ka warramaya. Haddaad akhrido Suuratu Fatxi oo ku tadabburto waad ogaan waxa jira. Akhri Anfaal, Aala Cimraan, Baqara, Axzaab, Muxamed iyo Kaafiruun. Ha akhrin oo kaliya ee macnaha u dhagraarici. Dhagayso oo dhuux oo ku dhaqan.
Walaalayaal maalinkii Ilaahay mujaahidiinta ka dhex saaray jawaasiistii inteedii badnayd sida Shariif, Axmed Madoobe iyo Indhacadde, waxaa kor u kacay oo barakoobay camalkii mujaahidiintu waday, xagga ciidanka, xagga siyaasadda iyo xagga dacwada iyo waxbarashada. Waxaa yaraaday xogtii gaaladu helaysay oo joogtada ahayd. Waxaa meesha ka baxay dacaayaddii shacabka loogu sheekayn jiray oo ahayd mujaahidiintu waa shisheeye, waa diinlaawayaal, waa dilaayaal oo dadkay iska dilaan, waa dhalinyaro aan caqli lahayn oo sufaho ah. Warkii Ictisaam!
Waxay galeen dagaallo waawayn. Waxay furteen buldaan ama magalooyin badan. Waxay isfahmeen shacabkii. Waxay la dagaallameen shirkigii iyo ehelkiisii. Waxaa nadiif noqotay sufuuftii jawaasiistu ka buuxday iyo murjifiintu. Waxay yeesheen hoggaan xalaal ah oo Ilaahay ku xiran ee aan gaalo ku xirnayn. Waxaa usoo laabatay haybaddoodii. Waxay noqdeen mujaahidiin laga haybaysto. Shacabkii raaci jiray hadba qolada adkaata hadda wuxuu la safan yahay ama raacaa hadba ninkii xaqqa ku taagan. Arrintaas waxaa libinteeda leh Ilaahayga waafajiyay xaqqa shacabka thumma mujaahidiinta oo waqti dheer ku bixiyay inay shacabka ka dhaadhiciyaan dhagarta shisheeyaha iyo dhuuniqaate.
Waxay heleen mujaahidiintu hub casri ah. Waxay heleen dhaqaale ku filan. Waxay heleen culumo dhufayska kula jirta oo xabbadda wax ka ridaysa cilmigiina laga qaadanayo. Allaahu Akbar wa lillaahil xamdu. Waxay fahmeen muddo dheer kadib qaabka loola dagaallamo gaalada iyo gaalaraacyada. Waxay barteen maamulkii dawladnimada. Waxay fahmeen siyaasaddii ama maaraynta hor-u-socodka bulshada.
Waxay fuliyeen xuduuddii Ilaahay oo aan waligeed Soomaaliya laga fulin. Dadkii bay ku dhiirrigaliyeen inay yihiin gob aan laga sarrayn (Muslim). Waxay kala dagaallameen gacma-hoorsigii shisheeyaha diintoodii ka fitnaynayay waxna aan u qabanayn (hay’adihii).
Waxaa ka heybaystay oo ogaaday gaaladii indhala’aanta kusoo gashay Soomaaliya. Adduunwaynuhu wuxuu xaqiiqsaday in Soomaaliya ay joogaan dhalinyaro awoodda inay caalamka oo dhan la wareegaan muddo gaaban kuna xukumaan shareecada Islaamka. Waxaa maalin walba looga hadlaa Golaha Amaandarrida ee Maraykanku samaystay, guriga Ban Kii Muun. Waxaa masayr la waashay culumadii Soomaaliyeed oo 50 sano soo waday dacwada, dhiil dhacdayna toosin waayay! Jugjug meeshaada joog (Ictisaam).
Cadawga Ilaahay intii uu islahaa mujaahidiinta Soomaaliya inta aysan xoogaysan ayuu caalamka oo dhan baray ama tusay inuu Soomaaliya jihaad ka socdo. Waxaa meel walba jooga rag jecel inay Ilaahay naftooda ka iibsadaan kuna jihaadaan gaalada iyo kuwa camiilka u ah (jaasuus). Waxaa soo buuxdhaafiyay saaxadii jihaadka ee Soomaaliya dhalinyaro ka timid daafaha adduunka. Waxay soo mareen badda, berriga, hawada, dhulka hoostiisa korkiisa iyo meelo aan laga malaysan karin. Maxaad ka taqaan ciidammada Ilaahay? Reer Xamarku waxay dhahaan “Sakiin liq!”
Mujaahidiintu uma baahna xayeysiis iyo halagaa sheego midna. Waxay qabteen waxay u qabteen Alle dartii. Waxay kaloo u istaageen shacabkooda dhibaataysan inay dhibaatada la qaybsadaan xalna u raadiyaan ay mushkiladdaan uga baxaan.
Waxay xasiliyeen oo nabad kusoo dabaaleen shareecadii Islaamkana ku xukumaan qiyaastii 11 gobol oo Soomaaliya kamid ah ama koonfurta Soomaaliya oo dhan.
Waa la yaqaannaa Soomaaliya gobolladeedii iyo magacyadii la oran jiray. Waxaa ka dhiman dhulka ay haystaan mujaahidiintu dhawr gobol sida Waqooyi Galbeed, Togdheer, Awdal, Bari, Sool, Sanaag iyo Nugaal. Waaba intaas haddaanan khaldanayn. Waxaa soo raaci lahayd Galgaduud iyo Mudug ayagana waa la isku haystaa. Mujaahidiintu dhinac dhan ayay haystaan. Intii kasoo hartay gobolladaas mujaahidiinta ayaa haysta oo shareecada Islaamka ku xukuma. Mujaahidiintu waxay yeesheen cadaw farabadan oo dibad iyo daakhilba leh.
Waxaa samaysmay xuduuddo u baahan ilaalin iyo difaacid sida Keenya, Itoobiya iyo kuwa murtaddiintu xukumaan ama Karazaayadu oo maalin walba lagusoo hubeeyo imaaradaas Islaamiga ah inay carqaladeeyaan. Waxaa hadda mujaahidiinta garabtaagan shacabkii ama bulshadii Soomaaliyeed oo kulligood isku duuban, dhalinyaro, odayaal iyo haweenba. Waxaa muuqatay guul wayn oo aan shisheeye kusoo degdegi karin, maxaa yeelay waxaa hadda difaaca utaagan waa shacabkii, shacabna lagama adkaan karo inshaa Allaahu. Waxaa isku duuban mujaahidiinta iyo shacabka. Allaahu Akbar.
Akhristayaalow waxaan qormadaan u billaabay in la ila arko mujaahidiintaan dhibaatadii loo gaystay, marxaladihii ay soo martay, siyaabihii looga badbaaday iyo meesha ay hadda wax marayaan. Ma siin karo mujaahidiinta xaqooda iyo waxay mudan yihiin inaan ku cabbiro qormo yar iyo wax la mida. Waxaan is leeyahay dadka kugu dhaama diwaangalinta ama xaqsiinta mujaahidiinta u bidhaami waddo ay ku dhiirradaan waxna uga qoraan inshaa Allaahu. Wixii aan xumeeyay waxaan rajaynayaa in la heli doono cid saxda.
Dhammaan akhristayaashii qormadaan la socday waxaan ku wargalinayaa inaan soo gaarnay biyodhicii ama ujeeddadii qormada. Qormadaan waxaan ula jeeday saddex arrimood:
Taariikhdii ay soo martay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin iyo himilladoodii (Islaam)
In mujaahidiintu ku cibraqaataan waxay soo mareen kana digtoonadaan khiyaamo dambe
In mujaahidiinta la garab istaago mar haddaad ogaateen dagaalka ay ku jiraan inuu yahay jihaad xaq ah. Waxaad kaloo ogaateen inta khiyaamo loo gaystay oo ay kusoo sabrayeen. Waxaad ogaateen inay been tahay aan sal iyo raad lahayn dacaayaddii ahayd, “Culumadii ayay warkoodii maqli waayeen. Shisheeyaa hoggaamiya. Waa wax-ma-garato,” iyo wixi la mida. Ma garanayo meel dambe oo dacaayad looga raadin doono mujaahidiinta (been-abuur).
Waxaa la dagaallamaya oo isu kaashaday dhammaan gaalo meel ay joogtayba. Ma aha wax ku cusub in gaalo iyo Muslim dagaal dhexmaro oo waa arrin soo-jireen ah. Marna Muslimiintaa guushu raacdaa marna gaalada (wadaamaysi). Jihaadka ka dhexeeya Muslimiinta iyo gaalada Muslimiinta wuxuu u yahay cizzi iyo sharaf. Gaaladana wuxuu u yahay badbaado iyo naxariis!
Haddaad tiraahdo waan garannay inuu Muslimiinta cizzi iyo sharaf u yahay ee see buu gaalada ugu yahay badbaado iyo naxariis? Wuxuu ugu yahay badbaado: Gaalada wixii dhintay ayagoo gaalo ah waxay galayaan Jahannamo. Qofkii ka shakiyaana asagaa gaal ah. Kuwa la qabto ama isasoo dhiiba waxaa loo bandhigayaa Islaamka markaasay Islaamka aqbalayaan. Kii Islaamkiisu wanaagsanaado kuna dhinta Islaamnimadiisa Jannuu galayaa inshaa Allaahu. Soo naxariis ma ahan iyo badbaado Ilaahay sabab uga dhigay jihaadka? Waxaa kaloo naxariis u ah ifsaadkii uu dhulka ku hayay oo laga badbaadiyay dad badanna ay dambigooda qaadan lahaayeen Naarna ku gali lahaayeen.
Mujaahidiinta waxaa siyaasad foolxun oo waali ay ka muuqato kula dagaallamay culumadii Ictisaam. Dhibaatada ay ku hayaan mujaahidiinta waxay ka daran tahay dagaalka gaalada. Sababtu waxaa weeye ninkaanu waa nin Muslim ah. Waa nin ay ka muuqato haybad culumanimo. Dadku warkiisa way aaminayaan (juhalada iyo munaafiqiinta). Waxay jihaadkii ku sheegeen fitno. Fitno maxay tahay ama dagaal fitno ah? Dagaalka fitnada ah waxaa la yiraahdaa: Dagaal ka dhexeeya labo qolo. Waxaad kala garan wayday qolada xaqa ku taagan. Waxaa waajib kugu ah inaad bannaanka ka marto oo aadan qolana u hiilin. Ictisaam hadday dagaalka fitno u arkaan maxay ula safan yihiin gaalada iyo gaalaraacyada? Waa been cad waxay ku andacoonayan ee waxay xaq u arkaan lana safan yihiin Bahuuke iyo iimaanlaawayaasha uu wato, Xaad iyo Axmed.
Dagaalkii ka dhexeeyay Amxaarada oo kaashanaysa Cabdillaahi Yuusuf iyo mujaahidiinta ma fitnuu ahaa oo waxaa la kala garan waayay kii xaq ku socday? Mise waadix buu ahaa oo waa lagu jihaaday gaaladii iyo gaalaraacyadii? Dagaalka ka dhexeeya gaalada madow oo kaashanaysa Shariif iyo mujaahidiintu ma fitnaa oo waxaa lakala garan la’ yahay cidda xaqa ku socota? Mise waa lagu jihaaday gaaladii iyo gaalaraacyadii? Maxaa is baddalay?
Culumadu ma idin la fayow yihiin? Maxaa la cabsiiyay Ictisaam? Shalay waxay ka qayb qaadanayeen jihaadkii lagula jiray Amxaarada iyo Cabdullaahi Yuusuf oo waxay ku jireen safka mujaahidiinta ayagaana hoggaaminayay dagaalka. Markii Xabashi Ilaahay jabiyay oo gacmaha mujaahidiinta sabab looga dhigay ayaa waxaa furintii ay ka bexeen soo buuxiyay gaalo ka liidata ayagii: Burundi, Ugaandha iyo Amxaaradii lafteedii oo aan maalin qur ah ka faaruqin xasuuqa Muslimiinta. Maxaa khaldan?
Wadaaddadii waxay la safteen gaaladii madoobayd. Waxay fitno ku sheegeen jihaadkii ay shalay wadeen, waxay shisheeye ku sheegeen dhalinyaradii ay dhaleen. See wax ka yihiin culumada Ictisaam? Masayr baa indhatiray xaqqiina ka daboolay! Oo raggu ma masayraa? Masayrka waxaa lagu yaqaannay haweenka. Haa way masayraan.
Nin masayrow ah ayaa habeen seexday. Waa masayarka sharcigu caayay. Shaki ayuu ku seexday asaga oo ay xaaskiisii ag jiifto. Waxaa la galay hurdo dheer. Habeenkii ayuu indhaha kala qaaday asagoo taxaddaraya. Intii uusan seexan wuxuu soo diyaarsaday mindi af badan. Guriga la jiifaa malahan nal oo waa mugdi. Waxaa jira xoogaa iftiin ah. Ninku wuxuu u jiifay gadicad ama dhabarka. Luguhu way usoo laabnaayeen. Markuu indhaha kala furay waxay ishiisii ku dhacday lowgiisii oo ula ekaaday nin naagtiisii ku fadhiya.
Wuxuu yaqiinsaday meesha in hawli ka socoto waxaan u muuqdana uu nin yahay. Wuxuu isu diyaariyay sidii uu u dili lahaa ninkaan u gacan dhaafay xaaskiisa. Mindidii afka badnayd ayuu tartiib u qaatay. Intuu isla baaciyay ayuu lowgiisii ku dhiftay oo dhinaca kale uga bixiyay. Kuma uusan baraarugin wuxuu toorayda ku dhiftay inay tahay cad asaga kamid ah ama lugtiisii. Waxaa ka qaalib noqotay masayrkii hayay. Lowgii oo mindidii ku jirto ayuu isku duubay oo qaylo afka ku dhiftay. Qayladu ma ahan inuu dareemay xanuun. Wuxuu u qaylinayaa dariskii oo waxay la tahay inuu hayo ninkii reerka kusoo xadgudbay.
Wuxuu rabaa inuu dadka ku fashiliyo ama ku ceebeeyo ninkaan uu naagtiisii uga maaro waayay. Dad baa qayladii kusoo baxay. Waxaa loo yimid ninkii oo dhiig baxaya mindidiina wali ku jirto. Markii ay dadkii u yimaadeen ayuu qayliyey oo yiri, “War tuugga ila qabta waxaan qabtay asagoo naagtaydii ku fadhiya.” Waxaa la yiri, “War Hooge meesha nin ma joogo. Waxaad toorayda galisay waa lowgaagii.” Markaas ayuu baraarugay xanuunkiina dareemay. Soo isuma eka masayrka haya Ictisaam iyo kan ninkaan ku habsaday?
Diintoodii ayay ka been sheegeen masayr daraaddii, carruurtoodii ayay inkireen masayr daraaddii, gaalay gacal moodeen masayr daraaddii, xaqqii iyo baadilkii ayay isku qaseen masayr daraaddii, kutubtii caqiidada ahayd oo al-Walaa wal-Baraa laga faa’iidaysan jiray ayay qariyeen masayr daraaddii, qaylay afka ku dhifteen oo waxay gaaladii ku dheheen noo kaalaya waxaan haynaa niman waddammadoodii soo gubay oo aan isaga maaro la’nahay masayr daraaddii. Waa carruurtoodii waxay garan la’yihiin oo ay u qabaan cadawga. Ictisaam waxay mindida galiyeen oo haddana dadka ugu yeerayaan cad ayaga kamid ah (raggay soo saareen). Masayr ayaase ka qaalib noqday wayna dhiigbaxayaan.
Sheekadaas aniga oo yar ayaan maqlay mase ogi inay run tahay iyo in kale. Laakiiin waxaan u keenay: Waxay iila egtahay masayrka ku dhacay culumadii Ictisaam iyo siduu u ool xun yahay. Maqribkii jihaadkii ay ku jireen ayay Cishihii waxay ku sheegeen inuu fitno yahay. Wiilashoodii ay dhaleen ayay ku sheegeen shisheeye aan la aqoon. Kutubtii ay dadka u akhrin jireen ayay qariyeen ama ka ceeb sheegeen. Gaaladii muxaaribiinta ahayd ayay isu dhiibeen oo ka wali dhigteen. Muslimiintii walaalahood ahayd ayay beri ka noqdeen oo ka haajireen ama ka hijroodeen meelihii ay nabadeeyeen!
Qormadaan waxaan kusoo gabagabaynayaa xadiith ka sugnaaday Nebiga (sallallaahu calayhi wasallam):
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ
جامع الترمذي ٢٦٢٩
Ikhwaanii maantay Islaamku waa qariib oo qofkii yiraahda waxaan rabaa ku-dhaqanka shareecada Islaamka waa lala yaabayaa. Waxaa lala yaabay oo qariib noqday ninkii sarwaalka gaabsada iyo gabadhii xijaab qaadata. Waxaa lala yaabay qofkii laga maqlo gaaladu cadaw ayey u tahay Islaamka. Waxaa la qariibsaday jihaadkii.
Gabagabada iyo gunaanadka qormadan waxaan mahad dhammaanteed u celinayaa Allihii ii fududeeyay qormadaan. Waxaan Ilaahay dambidhaaf u waydiinayaa walaalihii igu dhiirrigaliyey inaan billaabo qormadaan si fiicanna iigala qaybqaatay. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa akhristayaashii ama dadkii ku taxnaa qormadaan una taagnaa sixitaankayga iyo dhiirrigalintii ay ila garab taagnaayeen. Dadkii ku taxnaa qormadaan waxay sabab u ahaayeen inaan dhammaystiro markaan arkay siday u danaynayaan iyo dhiirrigalintoodii ay mar walba lahaayeen, “Ha daalin ee gaar yoolkaaga.”
جزاهم الله خيراً وغفر الله ذنوبهم
12/03/2014 Masoo Gaadhay Gaal iyo Wadaad Gaadh Uwada Taagan?Abuu Ibraahiimmaamule
Ikhwaanii waxaan kala tagnay ayadoo la sugayo in xabbaddu billaabato. Xabaddii waa billaabatay oo fooddaa la isku dhiftay. Waxaa jabay oo laga adkaaday gaaladiii isasoo bahaysatay iyo iimaanlaawayaashii ay ku shaqaysanayeen (murtaddiintii).
Walaalayaal waxaan soo marnay dhismihii imaaradaan Islaamiga ahayd inay Madaxwayne iyo Wasiirka Gaashaandhigga ka ahaayeen Shariif iyo Indhacadde. Labaduba waxay ahaayeen jawaasiis gaalada u shaqaynaya. Wax war ah lagama hayn oo waxaa loo qabay wadaaddo mujaahidiin ah. Waxaa lagu aaminay daahirkooda inay u ekaayeen Muslimiin mujaahdiin ah. Qalbigooda wixii ku jiray annaga nalooma dirin inaan ogaanno (nifaaq iyo jaasuusnimo). Allaa ogaa kana abaalmarindoona.
Mujaahidiintu dawladday samaysteen ama maamulkii imaarada waxaa Madaxwayne ka ahaa jaasuus. Waxaa Wasiir Gaashaandhig ka ahaa jaasuus. Maxaad u malaynaysaa inta ciidammada mujaahidiinta ku dhex jirtay jawaasiis? Aad ayay u badnaayeen. Mujaahidiinta waxaa isugu darmatay saddex dhibaato:
Dagaal saf balaaran ah oo gaalo oo dhan ay isu kaalmaysatay.
Bulshada Soomaaliyeed oo mujaahidiintu ka dhex dagaallamayeen oo aan caqiido adag lahayn oo markii gaalku guulaystana gaalka u mashxaradaya markii mujaahidiintu guulaystaanna mujaahidiinta u mashxaradaya.
Mujaahidiinta oo hoggaankoodu ahaa jawaasiis ciidankana ay ka buuxeen kuwo farabadan oo gaalada hoosta kala xiriira oo soo gudbinaya hadba meesha mujaahidiintu ka jilicsan yihiin. Waxaa kaloo jiray kuwo qaabilsanaa inay mujaahidiinta khalkhal ku ridaan oo ciidanka ku dhex jiray (murjifiin).
Waxaa intaas weheliyay ciidamo aad u hubaysan oo wata magac Muslim ama magac wadaaddo oo loo diyaariyay marka loo baahdo inay safka soo galaan (qabuuriyiin Suufiyo). Waxaa intaas barbar socday culumo shalay mujaahidiin ahaa oo maantay ku biiray safkii cadawga oo shacabkii awalba aan lahayn caqiido adag shaki ka galiyay jahaadka loogasoo horjeedo gaalada. Waxay dheheen, “Jihaad ma ahan ee waa fitno.” Waxay dheheen, “Qofkii dagaalkaas gala oo ku dhinta waa ehlu Naar!” Waa culumadii Ictisaam.
Qolooyinka aan arkayno inay mujaahidiinta hagardaamaynayaan maxaa ku kallifay arrintaas ama mawqifkaas xun oo gaalnimadu ka muuqato?
Culumada Ictisaam waxaa geeyay mawqifkaas xasad, fiqi yari xagga jihaadka ah iyo masayr ay ka masayreen dhalinyarada guulaha waawayn gaaray muddo yar (Shabaab).
Suufiyo intaan dagaalku billaaban ayay ahaayeen mushrikiin qabuuro-caabud ah. Waxay isku dhawyihiin xagga caqiidada gaalada aan waxba aaminsanayn ama mushrikiinta ah (wathaniyiin).
Shacabku ma lahan aqoon ay ku kala saaraan xaqqa iyo baadilka. Waxaa aqoon u ah wadaaddaha duubka wayn ee Soomaaliyeed. Hadduu yiraahdo wadaadku ama Ictisaam ay tiraahdo, “Waxa meesha ka socdaa jihaad ma ahan ee ha u dhawaanina,” sidii bay yeeleen. “Waa xaaraan ee ha u dhawaan waxaas!” Shacabku sidaasuu diin u haystaa. Hadduu yiraahdo, “Waa xalaal ee soo dhawow,” sidaasuu diin uhaystaa. Mar haddii ay yihiin culumadii aqoonta diineed loo tiirinayay.
Ikhwaanii yaanan ka warwareegin jabkii loo gaystay mujaahidiintii tirada yarayd laakiin tayada badnayd jazaahumu-llaahu khayral jazaa’. Walaaleheen waxay guteen waajibaadkoodii. Waxay la yimaadeen karti iyo sugnaan ay kala hortageen cadawgii isasoo bahaystay. Waxay fureen waddo ku cusub bulshada Soomaaliyeed oo afka ka sheegta inay Muslimiin yihiin. Bulshada Soomaaliyeed iyo culumadeeda waligood masoo marin laba arrimood oo mujaahidiintu ka dhaqan-galiyeen Soomaaliya:
In loo jihaado kitaabka Alle inuu kor noqdo dhiiggaaga iyo maalkaagana aad u bixiso.
In shareecada Ilaahay loo xukuntago oo ayada laga dhigto qaanuunka lagu kala baxo.
Walaalihii mujaahidiinta ahaa oo gaaladii inta gumaaday sii baacsanaya ayaa sufuuftoodii waxaa ka dhex dillaacay khalal iyo balbalo. Waxaa la waayay ciidammo dhan oo furinta ku jiray ama ciidankii gaalada dhuunta kaga jiray. Waxay banneeyeen aagag dhan. Waxaa ku dhex orday ciidankii Muslimiinta ahaa oo guul ku fadhiya gaalana jabtay jawaasiistii.
Waxay kor ugu qayliyeen war meel hebla la qabsay oo meel hebla la qabsay annagana waxaan ku jirnaa khatar haddaanaan meesha ka cararin (murjifiin). Waxaa run u maleeyay warka munaafiqiinta ama murjifiinta ducafadii awalba aan caqiido adag ku dagaallamayn. Waxaa kusoo dhiirraday shacabkii sheedda ka eeganayay dagaalka oo sugayay cidda laga awood roonaado. Shacabku waagaas (2006dii) wuxuu la jiray ciddii adkaata. Sabab? Hadda (2011) mujaahidiintay la jiraan. Sabab? Waxaa soo laabtay gaaladii carartay markay ogaatay in mujaahidiinta sufuuftoodii jilicday. Jawaasiistii ayaa gudbisay khabarkaas markaasaa gaaladii soo rogaalcelisay.
Waxaa gaaladii safka lasoo galay mushrikiintii qabuuriyiinta ahaa (Suufiyo). Waxyaabaha cajiibka ah oo Suufiyadu samaysay waxaa kamid ah: Gaaladii ayay dheheen, “Isu imaada oo meel isugu taga adinka iyo gaadiidkiinna. Waxaan idinku akhrinaynaa Qur’aan oo waan idiin xirsi xiraynaa si aad uga adkaataan nimankaan mujaahidiinta sheeganaya ama raba inay shareeco Islaam nagu xukumaan. Waxay rabaan inay dadka gacmaha iyo lugaha gooyaan dhagaxna ku dilaan. Yeeli mayno arrinkaas oo dhimashaan ka xignaa iyo inaan gaalada kaalmaysanno ayagana (Shabaab) aan dabargoyno.”
Mujaahidiintii waa la isu kaashaday. Waxaa hal mar iswareejiyay hoggaankii dagaalka. Waxaa isbaddalay dabayshii nasriga oo u socotay dhanka waqooyi. Waxaa soo labtay gaaladii quusatay oo saaxada ka baxday (ee carartay). Waxaa meel bannaan kusoo dhacay mujaahidiintii xaqiiqada ahaa ee u dagaallamayay Alle darti. Waxaa neefsaday munaafiqiintii walaalahood laga awood roonaaday. Waxaa isasoo muujiyay dad badan oo dhogor Islaam lahaa oo dhanka kale u wareegay gaaladana raacay. Waxaa dadka mujaahidiinta kamid ah mid adduunyo raadinaya. Waxaa kamid ah mid aakhiro raadinaya. Allaa wax og adinkuse wax ma ogidiin!
Wadaaddadii markay arkeen sida wax u socdaan iyo khiyaamada loo dagay oo sufuuftooda dhexdeedii ay ka billaabatay ama ayaga qaar kamid ah ay gaalada la shaqaynayaan ayay go’aan qaateen inay insixaabaan. Waxay ku ballameen meelo gaar ah inay isugu tagaan si ay dib isugu abaabulaan oo dagaal rogaalcelis ah u qaadaan. Waxaa mujaahidiintii ka dhex baxay munaafiqiin farabadan iyo murjifiin oo ku biiray gaaladii iyo murtaddiintii hor socotay gaalada.
Waxaa wali mujaahidiinta hoggaaminaya jawaasiistii ugu waawaynayd sida Indhacade iyo Shariif. Lama oga inay jawaasiis yihiin oo ayagaa talada laga qaataa ama hoggaankiiba ah. Mujaahidiintu waatay u hijroodeen Jubbooyinka si ay halkaas isugu abaabulaan gabbaadna uga dhigtaan hawdka Kismaanyo ka shisheeya. Waxaa wali horboodaya mujaahidiinta oo amiir u ah murtad jaasuus Shariif Karazaay. Waxaad xasuusataan inuu maalin iid ah ku tujiyay fagaaraha Kismaanyo mujaahidiinta asagoo amiir jaasuus ah.
Gaaladii kama harin mujaahidiinta ee way soo dabagashay. Markii Jilib la marayo ayaa waxaa lagu tashaday inaan lasii socon intaas ka badan ee bartaas jilibka lagu aasto oo gaalada mar labaad abaalkooda laga waraabiyo. Tuugo kula taalla tabtaada ma waydo. Maahmaahdaas waxay ka turjumaysaa wixii mujaahidiinta ay ku faleen jawaasiistii hoggaaminaysay. Ninka mujaahidiinta amiirka u ah oo ay amarkiisa qaadanayaan wuxuu jecelyahay in mujaahidiinu baabba’do oo laga adkaado. Wuxuu adeegsanayaa xeel kasta oo mujaahidiinta lagu jabin karo gaaladuna ku guulaysan karto. Allaa wax og annaguse wax ma ogin. Dagaallo kulul ayaa gaalada lagula galay Jilib iyo agagaarkeeda mase sii socon oo waxaa ka caga jiidayay munaafiqiintii hoggaaminaysay mujaahidiinta.
Maadaama gaalada ay hagayaan jawaasiista mujaahidiinta hoggaanka u hayay, gaaladii kama harin mujaahidiintii ee waxay uga dabatagtay hawdkii Kismaanyo ka shisheeyay. Waxay mujaahidiintii ku kala firireen dhulka baaddiyaha ah ee u dhexeeya Keenya iyo Kismaanyo. Waxaa dultaagan diyaarado ay hagayaan Shariif Afguduud iyo shaydaankii ka waynaa asaga ee Axmed Madoobe. Waxaa badda soo istaagay maraakiibta diyaaradaha xambaarta gantaallahana laga gano. Waxaa ka horyimid mujaahidiintii ciidankeedii Keenya.
Dhankii loo socday waxaa ka horyimid ciidankii Keenya. Dhankii laga yimid waa Xabashi taangi saaran. Kor waa diyaarado aan kula gafayn gantaalka. Dhanka badda waa gantaalo lagasoo liishaamayo maraakiib xeebta fadhiya. Dhexdayada ama mujaahidiinta dhexdooda waa jaasuus akhbaartooda bixinaya. Shacabku waataan soo marnay inay raacaan hadba ninka guushu raacdo oo hadda waxay la socdaan gaalada iyo murtaddiinta.
Waxa aan ka sheekaynayo ma ahan filim iyo shacwadiyo ama riwaayad. Qofkii garanaya tafsiirka Qur’aanka ha akhriyo Suuratul Axzaab. Waxa maalinkaas nagu dhacay ma ahan wax ku cusub Muslimiinta. Axzaab waxaa dhextaagnaa Nebi Muxamed (sallallaahu calayhi wasallam). Waxaa gaaray dhibaato ka wayn tan nagu dhacday asaga iyo saxaabadiisii. Axzaab waxay ahayd meeshii Ilaahay ku kashifay munaafiqiintii isku dhex qarinayay mujaahidiintii saxaabada ahaa. Annagana Ilaahay maalinkaasuu na kala saaray annaga iyo munaafiqiintii jawaasiista u ahaa gaalada dulliga ah. Ikhwaanii waxaan ku jirnaa xaalad adag. Halasoo duceeyo hubkana yaan la dhigin.
Ikhwaanii waxaan soo aragnay mujaahidiintii oo dhul aad u ballaaran nabadeeyay oo mooryaantiina hubkii ka dhigay dadkiina u jiheeyay waxsoosaar iyo iskaashi iyo isku duubnaan xag walba ah. Waxaan kala tagnay ayadoo mujaahidiinta weerar qorshaysan uu kusoo maqan yahay mujaahidiintuna ay diyaargaroobeen. Waxaan xusnay haddii wadajirka mujaahidiintu midaysan yahay inay isaga filan yihiin cadawga Ilaahay oo isasoo bahaystay.
Maamulkii dabadhilifka ahaa ee uu hoggaaminayey korneyl Cabdillaahi Yuusuf oo magaalada Baydhabo ka samaystay caasimad ku-meel-gaar ah ayaa magaaladaas kusoo daabulay ciidan tiro badan oo Tigree ah, ciidankaan Tigreega ah waxaa gadaal ka taagnaa ciidammada Maraykanka iyo kuwa gaalada adduunka, dhammaantood waxay ku midaysnaayeen ka-hortagga maamulkaan Islaamiga ah ee ka hanaqaaday koonfurta Soomaaliya.
Zanaawi oo ahaa garabka ugu weyn ee uu Cabdillaahi Yuusuf isku hallaynayey wuxuu si deeqsinimo ah ugu taageeray Ina Yuusuf ciidan farabadan iyo saanad milateri oo baaxad weyn, magaaladii Baydhabo waxay noqotay magaalo ay haystaan Tigreegu, waxay xeryo milateri ka samaysteen magaalada iyo bannaankeeda, waxayna billaabeen inay ciidammada Tigreega ah kusoo daabbulaan aagga hore ee ku beegan dhanka magaalada Muqdisho.
Mujaahidiintu waxay isku diyaariyeen dagaal baaxad weyn oo dabadheeraada, waxay ciidammadoodii galiyeen heeggankii ugu sarreeyey waxayna u diyaargaroobeen dagaal qarxi kara xilli kasta.
24tii Disembar sanadkii 2006dii ayey hal mar dagaallo culusi waxay si isku mid ah uga qarxeen dhammaan goobihii la isku hor fadhiyey, xabbaddii waxay ka billaabatay dhul baaxad wayn oo dherarsan, laga billaabo Baydhabo (Maanyofuulka), Baladwayn (Kalabayrka) illaa Gaalkacyo (Bandiiradley).
Waxaan tilmaamayaa waa furimmihii ugu waawaynaa laakiin dagaalku intaas waa ka baaxadwaynaa wuxuuna ka socday dhul aad u ballaaran. Ma ahayn oo kaliya dagaalku mid ka socday dhulka. Waxaa kaloo barbar socday madaafiicda aan loo meel dayayn oo lagu garaacayay dadka shacabka ah iyo dhismayaalka ay ku noolyihiin oo dhan. Waxaa ayana hawada ka duqaynayay diyaarado dagaal oo aan loogu talagalin inay la dagaallamaan jabhado ama dad shacab ah oo aan tikniko haysan.
Mujaahidiintu waxay ahaayeen jabhado aan haysan tikniko, maxaa sawaariikhda iyo diyaaradaha wax gumaada loogu adeegsaday? Waxaa kaloo lagu tijaabiyaa dagaalka mujaahidiinta oo la dhihi karo waa jabhado aan lahayn awood muuqata (mid maaddi ah) hubka kiimikada ah oo sanad walba la cusboonaysiiyo si loo ogaado qaabka uu wax u dilayo iyo meeluhuu ridada ku gaarayo (sida nugliyarka). Hubku mujaahidiinta oo kaliya wax u dhimi maayo ee wuxuu baabbi’inayaa dhammaan noolaha sida dadka, xayawaanka iyo dhirta intaba. Gaalada shaydaan baa u waxyooda oo wax u sheega. Shaydaankana waxaa wax u sheega Ibliis oo ugu wayn shayaadiinta.
Tusaale: Maalinkii Badar oo labada ciidan isasoo horfariisteen (Muslimiinta iyo gaalada), waxaa is arkayay oo kaliya insiga ama labadii col oo insiga ahayd. Dagaalka waxaa ku jiray oo qayb ka ahaa Ibliis oo gaalada safkooda ku jiray. Wuxuu arkayay wax aysan arkayn labada ciidan oo is horfadhiyay (malaa’igtii Jibriil hoggaaminayay oo ku jirtay safka Muslimiinta). Yaa malaa’ig ka adkaan kara? Wuxuu arkay khatarta ay Qurayshi ku jirto markaasuu yiri, “Waxaan arkaa wax aydaan arkayn,” waana cararay lacahahu-llaahu. Nebi Muxamed (sallallaahu calayhi wasallam) ayaa noo sheegay arrintaas oo waa xaqiiqo dhacday. Ninkii Ibliis waa noolyahay sidii ayuuna wax u arkaa (malaa’igtii). Laakiin waxaan jirin Nebi nool oo kasoo warramaya waxa dhacaya iyo akhbaarta kor ka imaanaysa ama ciidammada kor kasoo dagaya oo ku jira safka Muslimiinta. Malaa’igta oo mar walba heeggan ugu jirta ciddii diinta Ilaahay u gargaaraysa lagana helo Ikhlaas iyo Mutaabaco.
Ibliis Ilaahay wuxuu siiyay nolol dheer oo Ilaahay ogyahay intay ku dhammaanayso. Waxaa kaloo Ilaahay siiyay awood uu isu ekaysiin karo ciddii uu doono sida dadka, xayawaanka iyo wixi la mida. Wuxuu kaloo leeyahay awood uu dadka banii-Aadamka ah wax ugu sheego sida maalinkii Badar oo uu iska dhigay qof caadi ah oo la garanayo, nabaddoonkii Suraaqah ibnu Maalik. Maalinkaas si toos ah ayuu ula hadlay Quraysh, haddana wuxuu si toos ah ula hadlaa gaalada waddadii Quraysh ku socota sida Maraykan, Ingiriis iyo saaxiibbadood. Wuxuu ku ridaa kibir iyo islawaynan. Wuxuu kaloo si wax ah wax ugu sheegaa ama ugu yimaadaa Suufiyada ama qabuuriyiinta. Wuxuu u qurxiyaa baadilka iyo ehelkiisa ama gaalojacaylka iyo in ayaga xulufo la noqdaan.
Wuxuu waswaas iyo adduunyo-jacayl ama geeri-ka-carar ku ridaa culumada waawayn oo Rabbaaniyiinta ah sida Ictisaam, Talafiya-Jubni, Askaas (waa miro la cuno), ma istaahilaan in la yiraahdo Islaax maxaa yeelay waxay ka shaqeeyaan ifsaadka. Fiiri Qurdubi! Intaas oo qolo dhammaan saaxada dagaalka way ka qaybqaadanayeen. Qolo walbaa shaqay haysay lid ku ah mujaahidiinta iyo safkooda. Waxaa intaas dheeraa jawaasiistii aan kasoo hadalnay oo tayaarka dhan ama imaarada oo dhan madaxda u ahaa sida Murtad Shariif, wa akhiihi fil caqiida Indhacadde.
Walaalayaal aan kusoo laabanno furintii oo dhiiggu qulqulayo. Gaalo markay weerarka soo qaadday waxaa sutida u qabtay wiilal yar yar oo aan loo malaynayn inay karti intaas le’eg leeyihiiin. Gaalo indheheedu waa murtad. Murtaddiintii ama jawaasiistii ayaa ugu sheekeeyay gaalada, “Waa xoogaa yar oo aan tabar hayn mujaahidiintu, shacabna lama socdo oo shacabku annagay na taageersan yihiin. Marka hal dagaal ayaa ku filan oo aan dhammaantood kusoo qabqaban karnaa.” Waa Indhacadde iyo Shariif warbixintoodii.
Gaalo waxay weerarkeeda ku dhistay akhbaar ay ka kala heshay Ibliis, Indhacadde, Shariif iyo jawaasiis si gaar ah ugu dhex jirtay mujaahidiinta (kuwo culumo u eg). Gaaladu waxay dagaalka kusoo gashay dardargalin iyo hididiile ay islahayd waxaad saacado ku gaari doontaan magaala-madaxdii iyo saldhigyadii imaaradii Islaamiga ayayd oo jawaasiistu hoggaaminayeen laakiin aan war laga hayn. Allaa ogaa kana abaalmarin doona ayaga iyo kuwo kale oo aan illaa iyo maanta wax war ah aan laga hayn walina ku dhex jira Muslimiinta iyo sufuufta mujaahidiinta.
Gaaladii waxay la kulantay dharbaaxo ay ku waano qaadatay. Waxay ku jabeen weerarradoodii ugu cuslaa oo aysan waxba la harin. Cir iyo dhulba waxba lamay harin. Waxaa meesha ka baxay xogtii shaydaanku dhagta ugu sheegay oo ahayd waa koox yar waxa meesha joogaa oo aan shacabku taageersanayn ee horay u socda illaa aad ka gaartaan Muqdisho. Iskadaa inay Muqdisho tagaan waxaa la geeyay sidii loo cayrsanayay intii dhurwaa la cayriyo. Dhanka Baydhabo waxaa la dhaafiyay magaalada Baydhabo oo waxaa la geeyay Diinsoor oo Baydhabo u jira boqollaal kiilomitir.
Dagaalka Baydhabo wuxuu ka billawday xooggiisu Maanyofuulka oo Baydhabo qarka ku haysa. Inta la jabiyay gaaladii oo sufuuftoodii la dhex maray ayaa sidii loo carsanayay waxaa la geeyay meesha caanka noqotay ee lagu magacaabo Iidaale. Allaahu Akbar. Illaa iyo maantay waa yaallaa subaggii ka baxay gaaladii kibirka ku timid ciidda Soomaaliya. Waxaa laga waraabiyay laami kulul ama cadaab duuna cadaab, kii aakhiro ka hor! Haddaad oran lahayd see Diinsoor ku tagteen adinkoon Baydhabo qabsan? Waxaan ku leennahay: Baydhabo waxay lamid ahayd Filla Soomaaliya.
Filla Soomaaliya waxa ku jiraa waxay la mid yihiin dawoco god ku jirta! Hadday godkeeda ku jirtana cidna wax yeeli mayso, haddaad ugu gashana way ku xagxagan kamana saari kartid oo godku hal af ayuu leeyahay salkiisana lama gaari karo. Baydhabana waxay la mid tahay Filla Soomaaliya. Baydhabo waxaa laga fadhiyay wadda kasta oo soo gasha. Waxay sugayeen in la yiraahdo gacmaha kor u taaga. Waxay maqlayeen rasaasta yar yar iskadaa madaafiicda iyo garnaylada gacmaha laga tuuro oo gariirkoodu rajo beel ku riday taliskii Cabdullaahi Yuusuf, Gabre iyo baarlamaankii riddoobay.
Mujaahidiintu waxay cod dheer ku gaarsiiyeen Cabdullaahi Yuusuf iyo cadawgii u kaalmaynayay inay isa soo dhiibaan haddii kale la gumaadi doono. Mujaahidiintu waxay ku guulaysteen inay jabiyaan cadawgii isasoo bahaystay. Waxay ka fakarayeen tallaabada tan xigta oo ay qaadi lahaayeen, mar hadday jabiyeen gaaladii soo duushay. Dagaalkii ka socday koonfurta ama Baydhabo iyo agagarkeeda wuxuu soo gaaray heer gabagabo ku dhaw. Waxaa la jabiyay dhammaan gaalada iyo axbaashtii la socotay (murtaddiintii).
Waxaa kaloo dagaalku ka socday gobollada dhexe sida Baladwayne oo kale. Gaaladii furkoodaa biyo loogu shubay, waa laga adkaaday. Waxaa lagu celiyay meeshay ka yimaadeen gaaladii iyo gaalaraacyadii ayagoo hoogay oo aan gaarin hammigoodii ahaa dabargoynta mujaahidiinta. Waa la baacsaday si loo xaqiijiyo jabkooda. Waxaa la gaarsiiyay xuduudihii gumaystuhu sameeyay sida Kililka 6aad (Guriceel) iyo Kililka 7aad (Gaalkacyo).
Gaaladu waxay rabtay inay Xamar qabsato laakiin waxaa khatar galay gobollo ay mar hore maamullo Karazaay ah ka samaysatay. Bandiiradlay waxay Gaalkacyo u jirtaa wax ka yar 50 kiilomitir. Waxaa laga yaacay oo la fadhin waayay Gaalkacyo iyo Garoowe. Waxaa u qaadan waayay jabka gaaray Tigreegii aan aqoon dagaal mujaahidiinta dhabta ah. Gaaladii markii waagii ku baryay oo meel walba looga biyo keenay ayay adeegsatay takhdiidkeedii ugu dambeeyay. Takhdiidkaas waxaa la isticmaalaa oo kaliya marka lagaa adkaado oo aad rabto inaad ciidankaaga soo badbaadsato. Waxaa dhici karta in lagaaga adkaado, waxaa kaloo dhici karta inaad ku guulaysato oo ay laba midkood noqoto:
Inaad is badbaadiso ciidankaagana lasoo baxdo wixii ka haray.
Inaad ciidankaagiina badbaadiso cadawgiina dib u qabsato oo adigu aad yeelato gacanta sarraysa (Balaan Bii).
Gaaladu waxay ku jabtay balaankii koowaad, Balaan Ee (A). Waxay hadda gudagaleen Balaan Bii. Gaaladu waxay ku talagashay inay mujaahidiinta jabiyaan ayagoon isticmaalin balaankooda labaad waase u suuroobi wayday. Waxay isticmaaleen hub kasta oo casri ah. Waxay keeneen diyaarado sun buufinaya. Waxay safka soo galiyeen boqollaal taangi ama tikniko. Waa lagu takbiirsaday oo waxba uma tarin talana farahooday ka baxday. Waxaa gilgishay oo fadhin waayay Kilirlkii 8aad (Hargaysa). Waxay ku calaacaleen, “Caalamku ha nagasoo gaaro argaggixisaa nagusoo fool leh.” Waxaa socda dagaal faraha looga gubtay. Gaalo waa jabtay. Waxaa loo baahan yahay in la israaciyo. Waxaa nagu batay shuhadadii inshaa Allaahu iyo dhaawicii. Halasoo gurmado oo haloo gargaaro walaalaha furinta ku jira. Qof walbaa hasoo qaado wuxuu awoodo.
Waa inoo qormada dambe inshaa Allaahu tacaalaa.
Ikhwaanii waxaan kala tagnay ayadoo magaalada Xamar iyo hareeraheedii la nabadeeyay oo ay shaqaynayaan dhammaan waxyaabihii daruuriyaadka ahaa. Waxaa si dhab ah usoo muuqday isku fillaansho ay gaartay mandaqadda koonfureed khaasatan magaala-madaxdii iyo hareeraheedii. Waxaa laga maarmay ciidan shisheeye oo yiraahda waxaan soo celinaynaa nabaddii Soomaaliya. Waxaa laga maarmay hay’adihii oran jiray waxaan badbaadinaynaa kumanaan kun oo qaxday oo qaxooti ah, oo ay kamid yihiin Hay’adda Qaxootiga Adduunka (UNHCR) iyo Barnaamijka Cuntada Adduunka (WFP) iyo kuwa la mida.
Waxaa laga maarmay gacma-hoorsigii shisheeyaha. Waxaa yaraaday cudurradii dadka ku dhacayay maxaa yeelay waxaa meeshii laga suuliyay cudursidayaashii ugu waawaynaa ama fidinayay cudurrada sida hay’adihii qaybinayay cudurrada kala ahaa aydhiska, jixdheerta, qaaxada, qallalka, shubanka ama fuqbaxa, dhiig la’aanta iyo wixi la mida. Waxaa kaloo meesha ka baxay nadaafad-xumidii magaalada taallay.
Waxaa la joojiyay oo dadkii ka nasteen raashinki dhacay iyo daawadii dhacday oo dibadda lagasoo daabulayay. Waxaa la xallin waayay illaa haddana taagan cudurro kusoo kordhay waddanka intii dawladdii dhexe ay burburtay. Cudurradaas waxaa loo tiirinayaa inay ka imaanayaan qashinka nugliyarka oo badaheenna lagu aasayo. Hala waydiiyo arrinkaas Cali Mahdi iyo saaxiibbadiis.
Mujaahidiintu waxay isku laasimiyeen inay saddex shay gacmaha ku haystaan:
Kitaabka Qur’aanka iyo Sunnada
Qori iyo saanaddiisa
Yaambo ama qalabka waxsoosaarka.
Intaasay awoodeen Allana la kaashadeen. Waxaa meeshaas ka hirgalay imaarad yar oo caalamka oo dhan macruuf ka noqotay. Waxay imaaradaasi ku caanbaxday inay soo hoyisay guulo ay gaari waayeen dawlado, hay’ado, culumo, mufakkiriin iyo wixi la mida. Waxaa caddaatay hadday mujaahidiintu laba sano maamulkaan hayaan inay Soomaaliya oo dhan xasillooni kusoo celinayaan isuna keenayaan ummadda kala fogaatay ee Muslimiinta.
Lix bilood gudahood ayay xasiliyeen oo nabad kusoo dabaaleen horumarna gaarsiiyeen koonfurta Soomaaliya oo dhan marka laga reebo meelo yar sida Baydhabo oo kale. Waxaa hubaal ah hadday lix bilood oo kale ku darsadaan inay Hargaysa iyo Boosaaso ka taagi lahaayeen calanka uu Tawxiidku dhexda kaga yaal. Waxay awoodi lahaayeen inshaa Allaahu tacaalaa inay Soomaaliya oo dhan walaalnimadeedii usoo celiyaan oo nabadeeyaan hal amiirna usamayn lahaayeen. Nasriga Alle waa dhawyahay. Jayshu Muxamed sawfa yacuud.
Horumarkii xawliga ku socday wuxuu dhibay raggii dhibkaan oo dhan ka dambeeyay oo markii horaba ka shaqeeyay in Soomaaliya burburto si Itoobiya gacanta loogu galiyo. Waxaa maslaxaddoodii ku luntay horumarka la gaaray hoggaamiye-kooxeedkii qandaraaska kasoo qaatay gaalada. Waxaa qaadan waayay wanaagga ay soo hoyiyeen dhalinyarada yaryar ama ducaadda aan da’da waynayn culumadii waligood bulshada ku dhex jirtay wax horumar ahna aan ka gaarin dacwaday wadeen 60 sano (Ictisaam).
Balaayadaan iyo fawdadaan waddanka ka dhacday oo aan u qabno inay ka dhalatay dawlad la’aanta rag bay beer u tahay oo sugaya inay usoo go’do.
Tusaale: In la qaxo, in la gaajoodo, in cudurro la garan waayay dadka ku dhacaan, in qabiil qabiil la isu laayo, in aan la helin dawlad la yiraahdo Soomaaliya, in qolo walbaa calan ayada u gaar ah samaysato oo ay ku dhawaaqdo dawlad-goboleed, inaan la helin ciidan Soomaaliyeed oo hubaysan iyo wixi la mida, waxaa arrintaas ka shaqeeyay oo kharash badan ku bixiyay kaniisadaha Kiristaanka oo ku midaysan arrintaas waxayna kaalmaysanayeen caada-qaatayaal Soomaaliyeed.
Boobabka ama wadaaddada Kiristaanku waxay ka midaysan yihiin la-dagaallanka Islaamka. Waxay ogyihiin caqiidadooda xunta ah inay tahay mustaqbalkooda. Waxay dhiiggooda, maalkooda iyo maskaxdooda ku bixiyaan meel marinta Kiristanka socon la’. Ma jiro hal wadaad oo Kiristaan ah oo jaasuus u ah Muslimiinta. Ma jiro hal siyaasi oo Kiristaan ah oo inta ciidan soo kaxaysta ku burburinaya meeshii reerkooda dagganaa asagoo ka barbar dagaallamaya ciidan Muslimiin ah oo gaalada jihaad kula jira! Ma jiro oday dhaqameed iyo ugaas Kiristaan ah oo dhuuniqaate ah ama laaluush-qaate oo inta xoogaa shilimo ah la siiyo idaacadaha ka caayaya diintiisii iyo ehelkeedii! Ma jiraan janan ama saraakiil sar sare oo gaalo ah oo askari dable ah oo Muslim ah amarkiisa qaadanaya ama uu maamulayo wuxuu rabana ku samaynayo. Ma jiro arday ama jaamacad ha dhigto ama dugsi hoose ha dhigto oo Kiristaan ah oo ka faanaya dhaqankiisii, afkiisii, ilbaxnimadisii, abtirsigiisii iyo wixi la mida. Ma jiraan gabdho gaalo ah oo inta xijaab soo qaatay indhashareerna ku darsaday oo waliba ku faanaya! Ma jiro dhakhtar Kiristaan ah oo qof dadkiisa ah oo dhiigbaxaya la gorgortamaya oo leh way yartahay lacagtu ee ku dar, intii ku dar iyo iga dhin la waday qofkii geeriyooday. Maxaa noo haray dadkuba wuxuu ka kooban yahay intaas la sheegay?
Si kastaba arrintu ha ahaatee mujaahidiintu waxay ku dadaaleen inay dadka wacyi galiyaan xag aakhiro iyo xag adduun intaba. Waxay ku guulaysteen oo u dhaga-nuglaaday dad fara badan. Dadkii waxay billaabeen inay noloshoodii maareeyaan markay nabad heleen. Waxay billaabeen inay goobaha cibaadada soo camiraan. Waxay billaabeen inay diintoodii oo baraxla’ bartaan. Waxay ogaadeen waxa lagula dirirayo inay tahay Islaamnimada. Dadku waa Islaam waxaase luggooyay Suufiyo iyo Ictisaam! Soomaalidi inteeda badan ma ahan bulsho la isku hallayn karo oo ay ka dhaadhacday caqiidada al-Walaa wal-Baraa.
Inshaa Allaah waxaan gaari doonnaa ayagoo dagaalkii markuu kululaaday ay furintii uga bexeen mujaahidiintii, waxaase qalbigooda iimaanku taabtay oo mujaahidiinta ka barbar dagaallamayay dad aan ka badnayn boqolkiiba-5. Miyaad illawdeen Muqdisho iyo Sagaalkii Maalmood dagaalkii loogu magacdaray waxa ay sameeyeen qabiilooyin badan oo furinta ku jiray. Axmed Diiriye iyo Xaad maalinkaas jihaadkay ku jireen xaq bayna u arkayeen. Maxaa is baddalay? Cabdullaahi Yuusuf ayaa meesha ka baxay. Asagay ku jihaadayeen!
Ikhwaanii mujaahidiintii tirada yarayd tayo badanna aan hayn oo ay horyaalleen hawlaha waawayn waxaa kusoo kordhay in weerarro qorshaysan oo abaabulan lagusoo qaado. Weerarka waxaa xarun u ah Baydhabo. Baydhabo waxaa laga maamulaa Adis Ababa. Waxaa halkaas lagusoo daabbulaa ciidamo shisheeye oo aad u fara badan. Ciidammadu waxay leeyihiin caddaan iyo madowba. Baydhabo waxaa daggan koox yar oo Cabdullaahi Yuusuf Yey madax u yahay. Waxay ku xaraysan yihiin bakhaarradii Ee.Dhii.Sii (ADC) ay lahayd oo cuntada lagu kaydin yiray. Ma galley baa maxaa bakhaarrada loogu xareeyay?
Bakhaarrada dhexdooda ayaa raashinka lagu siiyaa oo looma oggola inay kala tagaan. Waxay isugu jiraan rag iyo dumar. Say u qayilayaan ayay is dhex seexdaan. Waxaa meesha dhexdeeda looga sameeyay hool wayn oo lagu shiriyo marka la rabo in wax laga saxiixdo. Gaaladu lama tashato fikirna lama waydiiyo baarlamaan-ku-sheegga.
Gaaladu markay mashruuc fulinayso waxay soo diyaarsataa mashruuceedii oo dhammaystiran markaasay inta hoolkii kasoo buuxiyaan ayay masawir ka qaadaan ayagoo gacmaha taagaya oo u eg dad xor ah oo doorasho ku jira. Dabadeedna waxaa la yiraahdaa arrintaas baarlamankii ayaa isku raacay. Waxaa loo yeeraa idaacado ay leeyihiin jawaasiis dhogor Soomaliyeed leh markaasay waxay faafiyaan baarlamaankii oo isku raacay in dawladdu tallaabadaas qaadday. Waxaa loo codeeyay in ciidan shisheeye la keeno!
Mujaahidiintu waxay gaarsiiyeen khayrkii ay wadeen ama imaaradii Islaamka ahayd meelo ka durugsan magaalada Xamar. Waxay gaareen illaa iyo gobollada Mudug ama Gaalkacyo agteeda (Bandiiradlay). Waxay gaareen illaa iyo Kismaanyo. Waxay gaarsiiyeen Baydhabo agteeda (Maanyofuulka). Mujaahidiintu waxay raadinayeen imaarad Islaami ah oo ku dhaqanta shareecada Islaamka.
Mujaahidiintu markay imaaraddaas u saldhigeen oo caalamka oo dhan laga daawaday wanaaggooda iyo xawliga ay ku socdeen oo ay gaalo hubsatay inay yihiin rag meel marin kara mabda’a ay wataan ayaa tartan loosoo galay: Maraykan, Ingiriis, Talyaani, Itoobiya iyo wixi la mida. Gaaladii waxay gashay inay kala shukaansadaan mujaahidiintii. Qolo walbaa waxay leedahay, “Annagaa idin aqoonsanaynee oo idin difaacaynee annaga na raaca. Waxaan idin siinaynaa dhaqaale farabadan. Haye dhaha?” Maya. Maya. Maya!
Waxaan soo marnay imaaradaan dhismaheedii inuusan xalaal ku dhisnayn. Maxaa yeelay waxaa madax ka ah rag ayagu dalbaday in hoggaanka loo dhiibo. Islaamku wuxuu qabaa ninkii yiraahda xukunka hala ii dhiibo inaan loo dhiibin. Khilaaf kama taagna.
Waxaa labeeyay, wadaaddada ama mujaahidiinta oo aan wali hurdada ka toosin oo sheekh kasta oo yiraahda taladiinna ii dhiiba ayay aamini jireen. Nin ku aaminay ha khayaamin.
Waxaa jiray oo kaliya ragga ciidammada hoggaaminayay ayaa ahaa rag adag ama baraarugsanaa sida Shiikh Abuu Mansuur, Mucalim Aadam Xaashi Cayroow, Shiikh Fu’aad, Abuu Zubayr iyo rag kale oo aad u farabadan oo ahaa hoggaanka ama furimaha ciidanka raggii joogay.
Gaaladu markay ka quusatay inay mujaahidiintu aqoonsi ka raadiyaan ama dhaqaale ayay heshiis la gashay jawaasiistii imaarada hoggaaminaysay. Madaxwaynihii iyo Wasiirkii Gaashaandhigga, Shariif Karazaay iyo Jeneraal Indhacadde. Haddaad xasuusataan Indhacadde waxaa looga yeeray xarunta laga xukumo Ictisaam ee ku taal Nayroobi. Xarunta waxaa fadhiya Maykal oo ah daaciga maalgaliya qalcadaha ama xarumaha Ictisaam ay ku leeyihiin Yurub, Ameerika, Afrika iyo meelo kale oo Alle og yahay dadkuse aysan ogayn. Maykal wuxuu kaloo qaabbilsan yahay dabargoynta dacwada Wahaabiyada. Wuxuu maalgaliyaa dacwada ay wadaan Suufiyada, Ictisaamka, Jadiidiyada, Shiicada iyo wixi la mida. Indhacadde iyo Maykal way wadahadleen, waxay kuwada hadleense Allaa og. Shariif Murtad, Indhacadde iyo kuwo kale oo gaaladu dhagta wax ugu sheegtay oo mujaahidiinta ku dhex jiray waxay waayeen fursad ay kaga dhaadhiciyaan mujaahidiinta in gaaladu aqoonsato dhaqaalana laga qaato oo lasoo dhaweeyo gaalada iyo ra’yigooda.
Mujaahidiintu waxay aqoonsi ka rabaan Allaah oo kaliya. Waxay iskaashi ka rabaan Allaah oo kaliya. Waxay gargaar ka sugayaan Allaah oo kaliya. Sharci-dajin uma baahna iyo kharash lagu bixiyo oo manhajkooda waxaa la dajiyay kun iyo afar boqol oo sano ka hor. Markay gaaladii iyo gaalaraacyadii ka quusteen dhalinyaradii hubaysnayd iyo imaaradii ay wateen inay hoos timaaddo maamulka Maykal iyo ducaaddii ku kadsoontay warka Maykal oo u qabay inaan laga maarmin gaalada iyo gacmo-hoorsigeeda ayay dagaal iclaansadeen gaaladii oo wadata rag dhogor culumo leh iyo jawaasiis intaba.
Waxay meel walba soo dhigeen ama xuduuddihii ciidamo ku hubaysan gaadiidka gaashaaman iyo diyaaradaha meel fog wax ka duqeeya. Waxaa mujaahidiintii lagu dhexsiidaayay jawaasiis aad u farabadan. Awalba jaasuusku waa ku dhexjiray laakiin tiradii baa la kordhiyay illayn waxaa loo baahan yahay xog dheeraad ah marka dagaal la qaadayo. Waxaa nalagu dhexdarsaday ciidammo aad u farabadan oo dhogor Islaam leh ama mujaahidiin u eg. Gaalo waxay ka baaraandegtay qaabkii ay noola dagaali lahayd. Gaalada waxaa la shaqaynaya jawaasiis isugu jirta culumo iyo caamaba.
Waxaa dhammaaday qorshihii weerarka. Mujaahidiintiina waa diyaargaroobeen. Qolo walbaa waxay sugaysaa xabbadda sharqanteeda. Mujaahidiintu hadday midaysan yihiin Allana kaashadaan way isdifaaci karaan. Hadday iskhilaafsan yihiin qaarkoodna gaalada la shaqaynayo jab ayey usoo jiidi kartaa. Siday mujaahidiinta la ahayd way isku duubnaayeen jaasuusna kuma dhex jirin. Laakiin sidaas arrintu ma ahayn!
Allaa wax og adinkuse wax ma ogidin! Waxaa nala amray inaan qabanno waxaan awoodno. Qaddarta lama celin karo dadaal ayaase nala faray. Wixii qarsoon Allaa og annagase waxaa nala faray waxa muuqda inaan wax ku qiimayno. Mujaahidiintu dhufays ayey ku jiraan oo qorigay kaybka hayaan gaaladiina waa soo dhaqaaqday oo waxay rabaan inay xabbadda billaabaan markay safka hore soo gaaraan ama usoo jirsadaan qiyaastii 500 oo mitir. Yaan la seexan si aan naloo gaadin.
Allaahumma munzilal kitaab wa mujriya saxaab wa haazimal axzaab, Ihzimhum, aamiin, aamiin. Waa inoo qormada dambe inshaa Allaahu tacaalaa.
Bismillaahi wabacdu. Waa qormadeennii 46aad. Ikhwaanii waxaan kala tagnay ayadoo magaaladii Xamar ahayd afka noo kala hayso. Waxaan soo marnay ayadoo magaalada laga nadiifiyay wax alla wixii khabaa’ith ahaa ama xumaan oo dhan inti la awooday. Maahmaah ayaa waxay ahayd qofkii madaxa meel la helaa minjuhuu meel la daydaydaa. Bulshadii ayadoo dhibban oo madaxii iyo minjihiiba meel la wayday ayaa mujaahidiin salka dhulka u dhigeen oo waxay ka dhigeen goob nabadgalyo ah magaaladii.
Bulshadii markay heshay nabadgalyo ayay tabeen nolosha inteedii kale oo ay kow ka tahay nafciga ama waxyaabaha daruuriyaadka ah. Dadku waqtigaas asaga ah ma jeclayn mujaahidiinta oo waxaa cadawgu ka dhaadhiciyay waa shisheeye nimanku idin laynaya ee ha u dhawaanina. Maahmaah baa waxay ahayd ilmahaagu markay kufaanna way kugusoo ooyaan markaad kuftana way kugu qoslaan!
Shacabka ay mujaahidiintu u khidmaynayaan oo ay naftoodii iyo maalkoodiiba u hureen haddii mujaahidiinta laga awood roonaadana way ku qoslayaan oo ku farxayaan markay mujaahidiintu gacan sarreeyaanna way kusoo ooyayaan oo waxay leeyihiin waan baabba’nay ee timir ma haysaan? Sow ma mooddid ilmihii yaraa oo aan waxba kala garanayn oo markaad kuftana kugu qoslayay markuu kufana xaggaaga usoo ooyayay si aad dhibta ula qaybsato. Ilmaha waa la barbaariyaa illaa ay ka fahmayaan aabbahood markuu kufo inay garabka qabtaan oo dhibta la qaybsadaan (xilkasnimo gaarsiin).
Shacabkuna wuxuu u baahan yahay in loo dulqaato oo wax la baro (caqiidada saxda ah iyo al-Walaa wal-Baraa). Waxa lagu dagaallamayaa waa shacabka maxaa yeelay qofkii u dagaallamaya in Ilaahay kalimaddiisu kor noqoto shacabkuna garab istaago ayaa guusha leh. Midda labaad shacabku waa dad Muslimiin ah oo la rabo in diintoodii laga fitneeyo ayaguna ma aysan helin cid u sharaxda dantuu ka leeyahay cadawgooda soo jireenka ah iyo kan dhogorta Muslim leh oo isu kaashaday inay waydaariyaan waddada xaqqa ah kuna adeegtaan oo ay u nacamleeyaan ayagoon fahmin khiyaamadooda dhuunta.
Mujaahidiintu waxay ku khasban yihiin inay qabtaan wixii ay awoodaan ayagoo Ilaahay ku raalligalinaya dadkaan walaalahood ahna ay ku dadaalayaan meeshii ay noloshooda ku maarayn lahaayeen ama waxsoosaar ay ka heli lahaayeen si ay uga maarmaan gacma-hoorsiga shisheeyaha aan u naxayn, badanaa hay’ado wata magac Muslim iyo mashaariic waawayn oo ay leeyihiin dadkaan wax ugu qabanaynaa haddana jawaasiis ah. Ha jaasuuseene waxba uma qabtaan bulshada oo intay Nayroobi hoteelladeeda dagaan ayay dhuuniqaate Soomaali ah waxay siiyaan 500 oo doollar. Markaasay waxay ku dhahaan noo sixiix waraaqahaan. Markaasuu u sixiixaa. Shahaadatu zuur.
Waraaqaha waxaa ku yaal inay Soomaaliya ka hirgaliyeen mashaariic waawayn oo ay ku baxday qiyaastii 45 milyan oo doollar, iimaanlaawihii qaatay shanta boqol waxay usoo dhiibaan 15 kartoon oo daawo dhacday ku jirto, 3000 cinjir ama kondhom waxay ugu yeeraan. Cinjirradaas waxaa ku moor-garaysan ama ku jira aydhis iyo cudurro la isku dardaray oo dilaa ah. Waxay kaloo dadka ku dhiirrigalinayaan inay dhillaystaan ama isu-tagaan hadday isu baahdaan. Cudurna qaadi maysid uurna yeelan maysid!
Waxaa kaloo loosoo dhiibaa Alle ma-liibaanihii lagu liibaanay 15 kun oo cirbadood oo la leeyahay waxay u fiican yihiin hooyada dhashay oo haddana dhiigbaxday. Waa dhalma-joojin cirbaduhu. Alaabtaas waxaa kamid ah dhawr kartoon oo ay ku jirto goojooyin ay leeyihiin waxay u fiican yihiin ilmaha jix dheerta qaba iyo dabaysha waase been. Waxaa laga yaabaa inay dhalooyinkaas kusoo shubaan biyaha badda dadkuna waxay u malaynayaan in daawo ku jirto markaasay saf dheer u galayaan. Reer ba’ow rag laawe.
Hay’adaha jawaasiista ah waxaa qaacidadooda kamid ah ama siyaasaddooda inay dadka barakiciyaan oo dagaal abaabulaan. Dadku markay islaayaan oo dhimasho iyo dhaawac soo gaaro oo ay baahdaan ayay dhex ordaan oo yiraahdaan waxaan wadnaa dhiig joojin. Maxay isugu dirayeen hadday dhiiggooda joojinayaan ama ka naxayaan? Dhaqanka Yahuudda ayaa sidaas ah Ilaahayna wuxuu kaga xikaayooday suuratul Baqara.
Aan usoo noqonno magaaladi Xamar. Waxaan soo aragnay magaaladii oo xasilloon oo nabad la helay xoogow bilicdeediina soo noqotay. Mujaahidiintu waxay u istaageen inay daboolka ka qaadaan ama kusoo celiyaan gacantii dadwaynaha ilihii dhaqaalaha oo shayaadiintu albaabbada isu dhifteen. Waxaa laga billaabay siday u kala muhiimsanaayeen. Waxaa xoogga la saaray in la furo dakaddii waynayd iyo eeraboorkii waynaa ee Xamar.
Waxaa la isugu geeyay muruq iyo maskax wixii la hayay. Waxaa lala kaashaday bulshadii iyo samafalayaashii u taagnaa horumarinta shacabka. Waxaa shaqo billaabay dakaddii iyo eeraboorkii Muqdisho. Waxaa kusoo xirtay maraakiib waawayn oo wada waxyaabihii daruuriyaadka ahaa oo dadku u baahnaa. Waxaa ammaan helay oo boobkii ka nabadgalay dadkii hantidooda la dhici jiray markay dakadda kala baxayaan. Dadka si toos ah iyo si dadbanba waa loo dhici jiray.
Mooryaantu si toos ah ayay u raran jireen raashinka ganacsatada oo xoog ayaa looga qaadan jiray mararka qaarkood. Mar marna waxaa la dhihi jiray na siiya kun kiintaal oo raashin ah iyo waxyaabaha ciidanku u baahan yahay waxaan idinsiin doonnaa markaan magaalada xorayno ama reer hebel ka adkaanno iyo wixi la mida. Waxaa kaloo kamid ah wixii lagu cuni jiray, keena canshuurtii dawladda hoose. Muxamed Dheere hadda xaggee buu ku dambeeyay? Tawbad baa u furan intuu nool yahay waase la dullaystay. Allow waafaji tawbada haddaad khayr la damacday asaga iyo kuwa kale oo Alle ka fogaaday.
Waxaa billawday dhaqdhaqaaq ganacsi dibad iyo daakhilba. Eeraboorkii baa waxaa kasoo dagay diyaarado waawayn oo isticmaali jiray eeraboorro aan xamili karin culayska diyaaradaha waawayn. Dadkii baa waxay ka raysteen meelihii fogaa ee ay diyaaraddu kasoo dagi jirtay sida Ballidoogle, Ciisalay, Nambar Konton, Dayniile iyo meelaha la mida. Dadku ayagoo maantoo dhan safar cirka ah kusoo jiray oo soo socday ugu yaraan siddeed saacadood ayay haddana waxay kusoo safri jireen dhulka oo asna qaadanaya ugu yaraan saacado kale. Safarka dhulku wuxuu ka khatar badnaa kii hawada oo asaga laftiisu khatar lahaa maxaa yeelay dadku waxay saaran yihiin diyaarado gaboobay oo aan adduunka laga oggolayn inay hawada galaan ama dad qaadaan. Kan dhulkuna khatartiisu waxay ahayd labo arrimood: jidka oo aad u burbursan oo waxaa laga yaabaa in gaariguba la gaddoomo rakaabka sababtuna ay tahay jidkoo xun iyo xirfad-yarida darawalka ama mas’uuliyad-darradiisa. Tan labaad waxaa meel walba taagan mooryaan markay gaariga guuxiisa maqlaan isbaaro dhiganaysa oo dadkana dhacaysa gabdhaha Muslimiintana kufsanaya.
Sidoo kale dakadihii yaryaraa waa laga raystay oo dadku waxay wax kalasoo dagaan dakaddii waynayd oo magaalada dhexdeeda ku taallay oo mujaahidiintu fureen. Dakadihii magaalada ka fogaa sida dakaddii Ceel Macaan oo kale dadku waxay ku qabeen dhib xagga amniga iyo xagga dhaqaalaha intaba ah iyo jidka oo ahaa mid xun ama aan sinnayn oo laga yaabo in gaarigu qalibmo, iyo isbaarooyin aad u fara badan oo mid walbaa kaa rabo inaad lacag badan siiso. Kuwaa laga yaabaa inaysan lacagba doonayn ee ay rabaan in ay hantida gaariga saaran oo dhan ay dhacaan. Waxaa laga yaabaa in dagaal faraha looga gubtay dhexmaro kooxda burcadda ah iyo hantiilayashii gawaarida wadatay.
Waa annagii soo marnay in dadku hubaysnaayeen oo dadka qaarkiis hubka isku difaacayeen marka hantidooda iyo sharaftooda lagusoo xadgudbo. Waxaa dhici jirtay dhimasho iyo dhaawac aan yarayn. Waxaa laga raystay safarradaas khatarta badnaa haddana aan laga maarmin oo maalin walba waxaa magaalada ka bixi jiray ama soo gali jiray safarro ama shixnado laga yaabo in dhiig badani ku daato marka ay baxayaan iyo marka ay soo galayaan intaba.
Shabaabku ama mujaahidiintu waxay isu qaabeeyeen ama u shaqaynayeen hab dawladnimo. Waxay sameeyeen goobo dadku u xukun tagaan oo loogu garqaado. Waxay sameeyeen ciidamo u taagan soo-qabashada ciddii dambi lagusoo oogo. Waxay sameeyeen ducaad ama odayaal dadka xogtooda qaabilsan. Waxaa hantidoodii loo celiyay dad farabadan oo laga faramaroojiyay tabacoodii ay kusoo dhinteen. Waxaa laga billaabay hanti soo celintii: aseendooyinkii waawaynaa iyo dhulkii ganacsiga oo ku yaallay meelaha waxsoosaarka leh sida dukaammada, bakhaarrada, hoteellada iyo wixi la mida.
Dadkii markay ammaan heleen oo la nabadgaliyay naftoodii iyo maalkoodii hantidoodiina loosoo celiyay oo lakala xukumay ayay u jahaysteen waxsoosaar. Waxay tacbadeen beerihii, waxay lasoo dageen badeeco ay ka keeneen dibadda, waxay dib u fureen bakhaarradii ay ku ganacsan jireen. Waxay fureen maqaaxiyihii dadku wax ka cuni jireen. Waxay fureen hoteelladii musaafiriintu ku nasan jireen. Waxaa la furay meelo caafimaad oo dadka lagu daaweeyo oo tayo leh.
Waxbarashadii iyo Dacwadii Caamka Ahayd
Waxaa loo gudbay in dadka jahliga lagala diriro oo wax la baro. Waxaa la furay dugsiyo Qur’aan iyo madaaris diinta lagu barto. Waxaa la nooleeyay dacwadii ka socotay masaajidda dhexdeeda. Waxaa la abuuray siyaasiyiin dadka ka dhaadhiciya in bulshada Muslimiinta ah ay leedahay manhaj iyo qawaaniin Rabbaani ah oo diyaarsan. Dadku ma yaqaannaan umana diyaarsana ku-dhaqanka shareecada Islaamka bal waa kasoo horjeedaan in lagu dhaqmo ayagoo aan is ogayn. Reer guura raac iyo carruur loo kala sheekee ismana arkaan!
Sheeko Gaaban ama xirfad ay adeegsadaan reer guuraagu: Dadka reer guuraaga ah waxay leeyihiin xirfado iyo dhaqamo ayaga u gaar ah. Waxay adeegsadaan murti ay kala dhaxlaan iyo maahmaahyo dhaqankooda ka warramaya. Xirfadahooda waxaa kamid ah: Markii reerku meel u hayaamo waxaa la galaa socod dheer. Waxaa daala dadka maxasta la yiraahdo ama carruurta iyo haweenka. Lama hayo gaadiid lagu xambaaro ilmaha daalay iyo hooyada dhiig la’aantu hayso oo laga yaabo inay xalay umushay ama sagaalkeedii dhammaaday (uur leh).
Cunuggu markuu daalo oo socon waayo ayaa kuwa asaga ka roon oo aan waxna u qaban karin kana tagi karin waxay adeegsadaan kalmad cabsi galin ah. Waxay yiraahdaan: war soo carar yuu ku cunin ama ku qaadan reera guura raacu! Markaasaa canuggu wuxuu adeegsadaa awooddiisii ugu dambaysay orod buuna is dhigaa asagoo argaggaxsan oo afkana qaylo ku dhiftaa. Sidaasaa lagu geeyaa goobtii uu doonayay aabbuhu inuu reerka ku furo.
Jumladaan ama murtidaan waxaan ka faa’iidaysanaynaa laba arrimood:
Midda koowaad: Dadka Muslimiinta ah iyo diintoodii waa la iska horkeenay ama la isku diray. Waxaa loogu sheekeeyay diinta Islaamku naxariis ma leh oo waxay ka hor imaanaysaa xuquuqul insaanka iyo Qurumada Midoobay waxay dheheen waxaa fiican ku-dhaqanka diin-muq-furad-la’aanta (dimuqraadiyada), waxaa lagu yiri Islaamku qofka oo nool ayuu dhagax ku dilayaa, qofkii oo nool ayuu cadba mar gooynayaa, lugta goo, gacanta goo, dhagta goo, ilig ka siib, sanka ka jar, carrabka ka goo, boqol karbaash ku dhifo!
Musiibada haysata dadka Muslimiinta ah intooda badan waxaa weeye aqoon la’aanta ka haysata diintoodii. Intii diinta taqaannay ama culumada la oran jirayna waxaa lagu ibtileeyay fulaynimo iyo adduunyo jacayl in yar oo Ilaahay u naxariistay mooyee. Kii wadaadka ahaa waa qariyay xaqqii asagoo danahiisii ka dhex arki waayay shareecadii Islaamka. Jaahilkiina maxaad ka sugi haddii caalimkii inxiraafay ama xaqqii qariyay?
Qodobka labaad waxaa weeye qofka banii-Aadamka ah iyo awoodda Ilaahay siiyay oo uusan isticmaalayn illaa uu dhibtoodo ama argaggax ku dhaco. Fiiriya canugga yarka ah. Wuu socon waayay oo iska fariistay. Markaasaa waxaa lagu yiri war bahalku ku qaaday ee kasoo carar. Asagoon cidi shidaal ku shubin ayuu konton kiilomitir jaray. Waa isla asagii laakiin markii hore naftaa ugu sheekaysay ma dhaqaaqi kartid ee halkaan fariiso. Soo uma eka fatwadii Shiikh Umal, Shible, Shiikh Xasan Ashkir iyo dhammaan odayada Ictisaam inay naftoodu ugu sheekaysay jihaad lama wadi karee isu dhiiba ciddii jihaadka lagula jiray meeshaad maraysaanna ma dhaafi kartaan. Naftiina ha haligina!
Culumada iyo ducaaddu waa daaleen laakiin waxay u baahan yihiin qolo ku tiraahda war iska jira reera guura raaca. Waan hubaa inay adeegsan doonaan awooddii Ilaahay siiyay oo ay naftu ugu sheekaysay halkaan ma dhaafi kartaan. Waxaan dadkii hore ka dhaxalnay murti iyo maahmaahyo. Waxay wax ku cabbiri jireen hal eray markay wada hadlayaan ama qofka laga rabo inuu ra’yi dhiibto. Tusaale haddaan usoo qaadanno erayga ah ama gabay: Rag tashaday dhul waa toli kaaraa taako labadeede. Eraygu wuxuu ka kooban yahay saddex jumlo. Rag tashaday. waa jumlo mufiido ah oo waxaa laga fahmayaa wadatashi. Dhul waa toli karaa, waa jumlo kale oo waxay muujinaysaa camalkii oo lagu dhiirraday oo aan laga biqin ama loo malayn inaan waxba laga qaban karin maxaa yeelay dhul dillaacay oo kala go’ay caqliga waxaa kusoo degdegaya inaan waxba laga qaban karin. Taako labadeed, waa jumlo kale oo muujinaysa inaan camalka maalin lagu dhammayn karin ee tartiib tartiib loo qabto. Haddaad damacdo inaad maalin qudh ah ku dhammayso dhismo dabaqyo ka kooban kuu suuroobi mayso oo waqtigu kuuma oggola awoodduna kuuma oggola markii qorraxdii kaa dhacdo adoo aan hal taako dhisin waxaa kugu dhacaysa qalbi jab iyo haziimo aadan mar dambe dhagax kor u qaadayn. Dadaal gaari doontide.
Nin ka degdegay biyo u muuqday oonna uu hayay! Waxaan maqlay in nin Soomaaliyeed xoolo usoo aroorsaday meel loogu sheegay inay biyo leedahay. Meesha waxaa looga cabbaa oo biyaha lagula soo baxaa wadaan iyo dowli. Ceelkii buu yimid. Xoolihii buu carruurtiisii ii celiya yiri. Wadaantii iyo dowligii ayuu ceelkii u daruuriyay ama u laalaadiyay. Wadaanta waxaa ku xiran xarig dheer. Wuxuu islahaa meel dhaw ayaad biyaha ka helaysaa laakiin ma dhicin oo ceelku waa dheer yahay. Markuu xariggii cabbaar ku daldalay ceelkii oo uu waayay sharqantii biyaha ayuu go’aan qaatay inuu wadaantiisii dib usoo ceshado. Wuxuu soo jiiday xarigii wadaantu ku xirnayd. Wadaantii ayaa u muuqan-wayday, inta toorrey lasoo baxay ayuu xarigii dhexda ka kala gooyay, wuxuu yiri asagoo aad u xanaaqsan inaga keena tan Caynabaa ka biyo dhow ee. Canynabo waa meel kale oo biyo leh laakiin ceelasheedu gaagaaban yihiin. Jumladaan waxaan ka faa’iidaynaa labo arrimood.
Samir la’aanta wadaadka ku dhacday oo biyihii oo uu dultaagan yahay uu sugi waayay.
Xariggii dhammaa oo uu xoolaha ku waraabsanayay oo uu iska kala gooyay dulqaad yaridiisa iyo fakar la’aantiisa. Ceelka ninka ka yaabiyay waxaa la dhihi jiray Walwaal iyo Wardheer wuxuuna ka doorbiday inuu aado Caynabo oo masaafo fog ujirta Walwaal iyo Wardheer.
Fulayow guuli kuu dhawaydaa! Wadaaddada gaalada isu dhiibay samirkii baa ka dhammaaday waxaase ku dhacay laba arrimood oo doqonnimo ah:
Ayagaa u maleeyay ee ma aysan daalin tabartiina kama dhammaan ee naf iyo shaydaan ayaa ugu sheekeeyay halkaas ha dhaafina.
Ha isdhiibaane maxay hubkoodii gaalada ugu wareejiyeen? Haddaysan hawsha wadi karin maxay walaalohood fil Islaam u siin waayeen hubka (ONLF). Waxaa taas ka murugo badan dhalinyaradii u dagaallami jiray magaca Ilaahay inuu kor noqdo oo la oran jiray mujaahidiinta ayay ku amreen inay la dagaallamaan ciddii magaca Alle kor yeelaysa! Magaciina waa ka baddaleen oo waxay u bixiyeen Niyuu Booliis. Waaba ku faanayaan mana qarsanayaan in magacooda la yiraahdo Niyuu Booliis Islaamiyiintana ay la dagaallamayaan.
Ikhwaanii waxaa na sugaya hawl aad u culus. Waxaa nagusoo wajahan duullaamo waawayn oo cadawgu soo maleegayo, waa gaalada asalka ah iyo murtaddiinta.
Waxaa caado u ah khayrlaawayaasha ama kuwa Ilaahay diintiisa la dagaallamaya markay arkaan iftiinka Islaamka inay isku dayaan inay damiyaan isuna bahaystaan la-dagaallanka diinta iyo ehelkeeda. Soomaaliya gaalo waxay ka damacday inaysan saldhigan dawladna aysan helin (dawlad Islaam ah). Waxay ku shaqaysanaysaa gaaladu dadkii bulshada hurmuudka u ahaa, culumadii, odayaashii, aqoonlaawihii in-yar-gartihii (indheergarad), ganacsatadii (dhuuniqaatayaashii), hay’adihii (jawaasiistii), saraakiishii (khaa’imiintii), Galaal iyo raggiisa.
Akhristayaaloow meel fiican ayaa wax noo marayaan haddaan nalagusoo duulin. Xilligu waa 2007. Wanaaggii Islaamku waa soo bidhaamay. Xamar waa la nabadeeyay, waxay gaartay horumar aysan gaarin waligeed. Waxaa hal mar daafaha caalamka laga wariyay wanaagga ay gaartay koonfurta Soomaaliya. Waxaa soo laabatay haybaddii laga xayuubiyay magaala-madaxda Soomaaliya. Dadkii Soomaaliyeed oo daadsanaa daafaha adduunka ayaa soo laabtay. Waxaa iskasoo dabadhacay dalabka qof walbaa oo raba inuu maalgashado ilihii dhaqaalaha. Warkaasu wuxuu dhibay gaalo iyo gaaloraacyo.
Waxaa la fadhin waayay oo gilgilatay Waashintoon iyo Landan, cabaad ayey afka ku dhifatay. Meles iyo Mooy waa is dhiibeen. Munaafiqiintii waa qexeen. Murtaddiintii waa milmeen waana la waayay. Muslimiintii waa maraxsadeen. Dhaqaalay heleen. Mucaskar-diide iyo minjaxaabiye-jihaad murugo darteed maruu huwaday (Al-Ictisaam). Waxaa midoobay maalin qura mujaahidiintii.
Ikhwaanii waxaan sii wadi doonnaa inshaa Allaahu waxqabadkii mujaahidiintu ay bulshada u adeegeen. Waxqabadka aan kasoo sheekaynay waxaa u dheeraa mujaahidiinta difaaca ay difaacayeen diinta iyo ehelkeeda. Waan hubaa inaan la is daynayn oo duullaan nagusoo maqan yahay laakiin gacanna beerahaan ku falanaynaa gacanna xabbaddaan ku ridaynaa. Allaahuma munzilal kitaab, wa mujriya saxaab, wa haazimal axzaab, ihzimhum, aamiin, aamiin.
Waa inoo qormada dambe inshaa Allaah.
11/03/2014 Masoo Gaadhay Gaal iyo Wadaad Gaadh Uwada Taagan?Abuu Ibraahiimmaamule
Bismillaahi wabacdu. Waa qormadeennii 45aad. Ikhwaanii waxaan kala tagnay annagoo ballanqaadnay inaan wax ka xusno waxqabadkii iyo halgankii ay soo mareen mujaahidiinta Soomaaliyeed (Shabaabul Mujaahidiin).
Mujaahidiintu waxay soo wadeen dagaalkaan ay kula jiraan gaalada iyo gaalaraacyada muddo dheer. Intaas ay dagaalka ku jireenna waxaa lagu hayey dhibaatooyin aad u badan sidoo kalena waxaa diiddanaa in mujaahidiintu khayr gaarto dad Soomaaliyeed oo badankoodu culumo ahaayeen.
Mujaahidiintu maxay raadinayeen ee loo diiddanaa? Mujaahidiintu waxay raadinayeen hal shay oo kaliya. Waxay rabeen in la helo dawlad Islaami ah oo shacabka Muslimiinta ah u khidmaysa. Haddii la helo dawlad ku dhaqmaysa shareecada Islaamka waxay bulshadu helaysaa dhammaan nolosha aasaasiga u ah qofka bani-Aadamka ah sida nabadgalyada, caafimaadka, waxbarashada, ganacsiga iyo ciidamo ilaaliya cirdiga iyo sharafta qofka Muslimka ah.
Hub ka-Dhigistii Maleeshiyaadka
Mujaahidiintu markay magaalooyinka qabsadeen waxay ka billaabeen waxqabadkoodii. Waxay hubkii ka dhigeen dadkii Soomaaliyeed ee uu cadawgu isku hubeeyay. Dadka hubaysnaa waxaa kamid ahaa dad ay adeegsanayeen hoggaamiye-kooxeedkii iyo gaalada waddanka kusoo duushay. Waxay u badnaayeen dhalinyaro aan tacliin lahayn ama baadiye laga keenay oo been loo sheegay.
Maleeshiyaadkaas waxaa mushaar u ahaa waxa ay dadka ka dhacaan. Waxaa raashin u ahaa qaad iyo daroogo. Waxaa xaasas u ahaa gabdhaha Muslimaadka ah oo ay kufsadaan haddana dilaan. Waxaa mustaqbal u ahaa riyo iyo mala awaal uu nafta ugu sheekeeyo intuu qaadka cunayo. Waxaa raaxo iyo nasiino u ahayd inuu dhaawac soo gaaro oo meel la isaga xooro. Maalinkuu dhaawacmo ayaa isugu dambaysa asaga iyo kaaba-mooryaanka. Halkaasuu ku waayaa naftiisii iyo riyadii daroogadu tusisay. Xaqiiqdu waa saas.
Dadka hubaysnaa waxaa kamid ahaa dad hubka ku ilaalsada naftooda iyo maalkooda. Waxaa kamid ahaa shirkadaha waawayn. Waxaa kamid ahaa dad aan ganacsi wayn lahayn laakiin hubka u qaatay inay cirdigooda ku ilaashadaan. Waxaa jiray hay’ado gaalo u shaqeeya oo aad u hubaysnaa. Hay’adahaasi waa kuwa maalgalinayay fawdada iyo dagaalka sokeeye. Hay’adaha magacyada khayriga ku shaqayn jiray waa kuwa Soomaaliya ama caalamul Islaami burburiyay.
Siyaasaddooda waxaa kamid ah intay bulshada soo dhexgalaan ayay fiiriyaan qabiilka ugu tunka buuran meeshaas ay rabaan inay baroosinka dhigtaan ama dagaan. Waxay kasii xushaan kuwooda sharafta ku dhex leh qabiilkaas, sida ugaasyada, nabaddoonnada, siyaasiga iyo kan xoogaaga lacagta ah leh. Waxay u qoraan ama siiyaan shilimo aad u yar. Waxay ka kiraystaan guryo iyo baabuur aysan u baahnayn si ay dantooda ugaaraan.
Inta ugaaska gurigiisa iyo baabuurkiisa gaaladu kirada ka bixinayso gaalku wuxuu doonuu samaynayaa. Waxaa difaacaya ugaaska iyo nabaddoonka reerka haddii gaalka la taabto.
Mujaahidiintu magaalada Xamar waxay ka dhigeen goob nabadgalyo ah. Dadku waxay fursad u heleen inay is dhex maraan oo kala adeegtaan waqtigay doonaan. Qaabka hub ka-dhigista waxay ahayd dhawr nooc. Shirkadihii waawaynaa sida kuwa xawaaladaha ayagu hubkoodii waxay ugu deeqeen intii badnayd mujaahidiinta markay arkeen in mujaahidiintu yihiin dad la aamini karo hantidoodiina u ilaalinayaan ayay tabarruc ahaan hubkoodii ugu wareejiyeen mujaahidiinta. Jazaahumullaahu khayran.
Qolada labaad waxay ahayd mooryaan dadka dhici jirtay oo aan dan kale hubka u haysan inay dadka ku dhibaan mooyee. Kuwaas birta ayaa laga aslay ama xoog baa looga qaaday hubkii, ayagiina waxaa lagu sameeyay dhaqancelin oo waxaa la geeyay xeryo loogu talo galay in lagu dhaqanceliyo illayn wuxu waa Muslimiin dhaqankii ka xumaaday. Raggaas la dhaqanceliyay waxaa kasoo baxay afraad aad u wanaagsan oo Islaamka wax u tartay.
Qolada saddexaad waxay ahayd qolo ayagu hubkooda hoosta ku haystay oo markii lasoo weeraro isku difaaci jirtay. Kuwaas waxaa la siiyay ikhyaar, kii raba in laga gado waa laga gaday kii raba inuu sadaqaystana waa loo duceeyay. Qaab caynkaas ah ayaa hub ka-dhigistu u dhacday iyo qaabab kale oo farsamaysan. Waxaa hubaysnaa oo kaliya mujaahidiinta.
Taasi waxay keentay in dadkii si dhaqso ah nabad u helo tuuggiina la qabto, noloshii aasaasiga ahaydna soo laabato oo magaaladii yeelato bilic wanaagsan iyo xasillooni.
Waxay ku xajiyeen hub ka-dhigistii inay la dagaallamaan wax alla wixii caafimaadka wax u dhimi lahaa sida qaadka, khamriga, daroogada kala gaddisan, dhillaysiga, qashinkii magaalada buux dhaafiyay, daawada dhacday, raashinka dhacay, sixirkii iyo wixi la mida.
Markii nabadgalyo la helay waxaa loo gudbay caafimaadkii oo faraha ka baxay. Intii dawladdii dhexe ay burburtay magaalada Xamar iyo magaala kasta oo waddanka Soomaaliya kamid ah waxay noqotay magaalo aan la garanayn cidda iska leh. Shacabka magaalada ku dhaqan oo ama dagaan ahaan u daggan ama safarka ku imaanaya waxaad mooddaa inaysan aqoon nadaafadda iyo qiimiga ay bulshada u leedahay.
Qofka magaalada guri ka daggan intuu gurigiisa qashinka kasoo saaro ayuu laamiga hortiisa mara ama guriga wajigiisa ku shubayaa markaasaa qashinkii wuxuu noqday buuro waawayn. Looma kala harin carruur iyo cirroolaba, haba ugu darnaadeen kuwa qaadka gada iyo kuwa kawaanlayaasha ah ama maqaaxilayda intaba.
Waxaa kuwaas ka daran oo dadkii halaagay kuwa isku sheega ganacsato. Ganacsatadu waxay u kala baxdaa labo. Qolo waxay keentaa daawo dhacday ama kartoon ay ku qoreen magac daawo oo aan daawaba ku jirin ee balo kale lagu shubay. Waxaa ku jira bur ama caanaboore sida lasoo wariyay. Intay shirkado tuugo ah heshiis la galaan ayay dhahaan noo sameeya wax daawo u eg. Waxay kaloo shirkadaha kasoo aruursadaan daawada dhacday, markaasay qiimo aad u jaban kusoo rartaan illayn daawo ma wataane.
Kuwaas dadkii waxay ku rideen ama u gaysteen labo dhibaato:
Waxaas daawada u eg ama daawada dhacday ah oo ay qiimo saa’id ah ka siiyaan.
Qofkii oo aan daawo qaadan ee qaatay cudur iyo waxyaabo naftiisii khatar u keeni kara.
Dadku waxaad mooddaa inaysan fayoobayn. Qofka daawada dhacday gadaya ama galka daawada lagu shubay caanabooraha waxaa laga yaabaa ama xaqiiq ah markii carruurtiisu xanuunsato ama xaaskiisa wuxuu daawada kasoo gataa farmashiyaha ugu dhaw markaasuu carruurtiisa iyo xaaskiisii siinayaa. Waxaaba laga yaabaa inuu asagu cuno. Ma fayooba!
Waxaa kamid ah kuwo ka ganacsada raashinka dhacay. Waxay xafiisyo ka furteen adduunwaynaha. Waxay u tagaan ganacsatada waawayn oo haya raashin ku baaray. Waxay kasoo qaataan raashinkii dhacay oo ganacsatadii lahayd meel ay gayso waayeen. Raashinku hadduu dhaco ama xumaado waa la gubaa loomana oggola in qof banii-Aadam ah uu cuno. Ganacsatadii lahayd raashinkaan dhacay waxay heleen labo faa’iido:
Waxay ka badbaadeen inay kharash ku bixiyaan raashinkaas gubitaankiisa.
Waxay ka heleen lacag oo waxaa ka gatay ganacsatadii Soomaaliyeed oo waalnayd!
Dadkaas caadaystay dhaqankaas xunka ah oo ku magacaaban ganacsatada waxay isugu jiraan ama yihiin tujaar, jeeble, culumo, siyaasi, aqoonyahan iyo wixi la mida. Haddaad istaagto Bakaaraha arki maysid dukaan uusan kasoo jeedin qof bidhaan wadaad leh. Dukaanka waxaa yaalla waxyaabihii aan kasoo sheekeeyay qayb kamid ah. Bakaaro markaan leeyahay waxaan ula jeedaa Xamar oo dhan ama waddanka intiisa kale. Dadka xalaasha cuna ama ka ganacsada ama og inay dhibaatadu asaga dib ugusoo noqonayso aad bay u yaryihiin waxaase jiraan kuwo aan badnayn oo ah dad yar oo Ilaahay u naxariistay.
Mujaahidiintu waxay olole ku qaadeen caafimaad-darradii ka dhalatay nadaafad xumidii. Waxay u guntadeen soo-celinta caafimaadka iyo bilicdii magaalooyinka. Waxay xakameeyeen oo ka hortageen in magaalada lasoo galiyo oo laga ganacsado raashin dhacay iyo daawo dhacday. Waxay baaritaanno ku sameeyeen bakhaarradii cuntada iyo daawada lagu kaydin jiray. Waxay gubeen waxay heleen oo raashin iyo daawo dhacday ah. Waxay banneeyeen waddooyinkii qashinku xiray. Waxay wacyigaliyeen dadkii. Waxay xumaantii uga hortageen meelihii ay kasoo galaysay sida eeraboorrada iyo dakadaha. Waxay mamnuuceen qaadkii oo ah hooyada xumaanta (ummul khabiith).
Waxay soo qabqabteen sixiroolayaashii dadka bakhtiga cunsiin jiray ama waalida ku riday. Nimankaas dadka sixra waxay kamid yihiin ama ka daran yihiin kuwii dadka ka gadi jiray daawada dhacday iyo raashinka dhacay, maxaa yeelay ummadda waalwaalan oo meel walba daadsan waxaa sabab looga dhigay saddexdaas qolo. Mid sixir ku waalay, mid daawo dhacday ku waalay iyo mid raashin dhacay ku waalay intuba sabab ayay utahay.
Ikhwaanii waxaan aragnaa mujaahidiinta oo haya hawl aad u baaxad wayn oo aysan baahideeda dabooli karin kaligood. Hawshaan ay hayaan mujaahidiintu waa hawshii ay qaban lahayd dawlad dhismaheedii u dhammaystiran yahay. Xagga dhaqaalaha, xagga siyaasadda iyo xagga caskariga intaba. Waxaa intaas u dheer dadka ay u shaqaynayaan oo intaas oo hawl ah ay uhayaan waa dad aan u diyaarsanayn ku-dhaqanka shareecada Islaamka iyo xukun-wanaagga dawlad Islaam ah.
Ayagaa laga sugayaa inay dadka wax baraan oo ka dhaadhiciyaan inay dantoodu ku jirto ku-dhaqanka shareecada Islaamka. Ayagaa laga sugayaa inay gaalada ka xorreeyaan waddanka ay kusoo duushay oo xoogga ku haysato. Ayagaa laga sugayaa inay dadka horumar gaarsiiyaan dhan walba leh inshaa Allaahu. Mujaahidiinta waxaa dhalay ama ay ka dhasheen Soomaalida aan kasoo sheekaynay oo ay haysato intaas oo mushkilad ah.
Bulshada Soomaaliyeed waxaa soo maray xukuumado kala duwan oo kulligood ku shaqaynayay qawaaniinta kufriga iyo ilxaadka. Waligood ma aysan arag dawlad Islaam ah iyo shareeco la isku dhaqayo. Waligood ma aysan arag caddaaladda iyo xukun-wanaagga dawlad Islaam ah. Sidaas darteed waxaa adkaatay ama dabodheeraatay sidii looga dhaadhicin lahaa bulshadaan in shareecada Islaamka lagu dhaqmo.
Musiibada ugu wayn iyo is-hortaagga ku-dhaqanka shareecada Islaamka waxaa lagala kulmay culumadii ayagu noqon lahaa hurmuudka ummadda xagga diinta. Waad ogaydeen lagdankaan soo marnay iyo inta nalasoo khiyaameeyay oo waliba culumadii talada noo haysay ay nagu faleen, Al-Itixaadkii hore iyo Ictisaamka cusub. Culumada Soomaaliyeed waa gartood oo waxay lamid yihiin bulshada Soomaaliyeed oo aan waligood arag xukuumad Islaami ah. Gacan la gooyo, lug la gooyo, dhagax la isku dilo, karbaash ama tacsiir. Intaas oo xukun ah ama xad waligeed Soomaaliya lagama fulin Shabaab ka hor.
Shabaabku lama imaan xuduudda gacan-goynta iyo rajmiga ama wixii lamid ah ee waxaa lagusoo dajiyay oo fuliyay Nebi Muxamed (sallallaahu calayhi wasallam). Waxaa intaas kasii daran waligood Soomaalidu ma maqal murtad ama qof gaaloobay oo Soomaali ah. Shacabku waa gartii laakiin waxaa musiibo ku dhacday culumadii oo u doodaysay murtad Ilaahay iyo Rasuulkiisii ka xariir furtay oo ku gaaloobay diintii asagoo aan cidi qasbin.
Culumadii Ictisaam diintii waxay ka dhigeen: Suufiyadii oran jirtay naagta aanan meherin annagu ma mehersana, dhaxalka aanan qaybin ma qaybsana, maydka aanan talqiin ku akhrin lama duugi karo, colka aanan u ducayn ma duuli karo, ninka aan habaarnaa waa inuu dhintaa, afartan jir ka yar diin ma sheegi karo, lama gaaloobi karo iyo wiixi la mida.
Ikhwaanii waxaan ku jirnaa dagaal dhib badan oo qofkaad dishaa (Soomaali) waa kugu dhimay kaana dhimay. Waxaan ku qasbannahay inaan Ilaahay raalligalinno. Intii Ilaahay noo caroon lahaa dadku ha caroodeen. Hawshaanna waan wadaynaa Inshaa Allaahu.
Waxaa na horyaal hawlo waawayn oo ay kamid tahay dagaallo lagu hoobtay.
Bismillaahi wabacdu. Waa qormadeennii 44aad. Ikhwaanii waxaan kala tagnay annagoo ballanqaadnay inaan faahfaahinno taariikhdaan dantii aan ka lahaa iyo cidday ku wajahan tahay. Waxaan joognay magaaladii Kismaanyo oo ducaaddii lagu yiri ama mujaahidiintii soo wareejiya gacan ku haynta magaalada maslaxad baa ku jirtee, ducaaddiina ay yiraahdeen yeeli mayno inaan wareejinno magaalada oo annagaa gacanta ku haynayna.
Taariikhdaan waxaan rabaa inaan ku iftiimiyo afar arrimood:
Jihaadkii Soomaaliya ka billawday 1991dii, ciddii billawday iyo marxaladuhuu soo maray.
Meeshuu hadda marayo iyo cidda wadda ama kusoo hartay saaxadii jihaadka.
Dagaalka loogasoo horjeedo mujaahidiinta, cidda kasoo horjeedda iyo goorta uu soo billawday.
Inta dhibaato loo gaystay jihaadka hadda kahor, dhagarta hadda lagu hayo iyo cidda ku haysa.
Waqtigii Jihaadka loo Qalabqaatay iyo Ciddii Wadday
Jihaadkaan waxaa billaabay dad Muslimiin ah ama culumo Soomaaliyeed. Culumadaas manhajkoodu wuxuu ahaa manhajka Salafu Saalix. Waxay ka dabqaadan jireen ama ku dayan jireen Nebi Muxamed (sallallaahu calayhi wasallam) iyo saxaabadiisii Alla haka raalli noqdee. Tayaarkaas magaciisa waxaa la dhihi jiray Al-Itixaad Al-Islaami. Waxay lahaayeen taageerayaal badan ama bulsho ku qanacsan dacwada ay wadeen ama jihaadkii.
Jihaadku wuxuu billawday 1991dii. Wuxuu marayaa 2011dii. Wuxuu soo maray marxalado kala gaddisan oo aad u dhib badan, sidaad kusoo aragteen qoraalladaan ayaanu ku ishaarnay waxyaabihii dhacay iyo ciddii ka dambaysay. Ducaaddii jihaadka wadday waxaa ku dhacay haziimo wayn oo xagga maaddiga iyo xagga diinta intaba leh. Waxaa saaxadii kusoo haray ducaad aad u yar. Waa sunno Rabbaani ah in la kala baxo oo Ilaahay kala saaro kan runta sheegaya iyo kan beenaalaha ah, geesiga iyo fulayga, munaafiqa iyo mu’minka, deeqsiga iyo bakhaylka.
Jihaadku wuxuu hadda marayaa meel uusan waligii gaarin, dhanka caskariga, dhanka siyaasadda, dhanka dhaqaalaha iyo dhanka shacbiyadda intaba. Waxaan rajaynayaa inay noqon doonto Soomaaliya meesha caalamku ku dayan doono xagga jihaadka. Waxaa hoggaanka jihaadka haya rag ikhlaas ka muuqdo. Waxay kaloo raggaasi muujiyeen samir iyo dulqaad aysan heli karin culumo badan oo ducaad sheeganaysaa. Waxay leeyihiin tababbarro ku filan ama khibrad caskari.
Ma Qabiilo Khaas ah Ayaa Wada Jihaadka Soomaaliya?
Jihaadka Soomaaliya ma ahan mid ku kooban koox, qabiil, mandiqad iyo waqti toona. Wuxuu u furanyahay Muslimiinta caalamka oo dhan qofkii awooda inuu yimaado, maxaa yeelay waa cibaado Ilaahay dadka Muslimiinta ah ku addoonsaday inay fuliyaan ayagoo waliba nacaya oo aan naftu rabin, khasab ayaad ku gali. Waa cibaadada Rasuulku (sallallaahu calayhi wasallam) uu ku sheegay inay tahay kuruska baarkiisa ama meesha ugu sarraysa diinta oo haddii ayada la waayo diintoo dhan la waayayo. Waqti malahan oo Ilaahay baa sheegay inuu soconayo illaa iyo maalinta qiyaamuhu soo dhawaado.
Dadka Kasoo Horjeeda Jihaadka waa Kuwee?
Waxaa dagaal kula jira shucuubta adduunka ku nool oo dhan marka laga reebo in yar oo Ilaahay u naxariistay mooyee. Gaalo oo dhan baa isu bahaysatay. Waxaa loo adeegsaday Muslimiin qaafiliin ah ama munaafiqiin ah oo isqariya oo dhogor Muslim leh. Waxaa loo adeegsaday dhuuni-qaate magac Muslim wata. Waxaa loo adeegsaday culumadii ama ducaaddii madaxda ka ahayd hoggaanka jihaadka. Looma kala harin jinni iyo insiba inay la dagaallamaan mujaahidiinta.
Goormay Soo Billaabatay Colaadda loo Qabo Jihaadka?
Wuxuu soo billawday dagaalkaan ay gaaladu ama gaalaraacyadu kula jiraan jihaadka xilligii ay diintu soo bidhaantay oo Nebi Muxamed (sallallaahu calayhi wasallam) lasoo saaray. Dagaalka waxaa galay oo dhawr jeer lagu dhaawacay Nebi Muxamed oo wata saxaabo aan badnayn. Waxaa la dagaallamayey gaalo isasoo bahaysatay, munaafiqiin Muslimiinta ku dhexjirtay, shayaadiin ama shaydaan oo waad xasuusatan Badar inuu ka qaybgalay shaydaankii isu ekaysiiyay nabaddoonkii la dhihi jiray Suraaqa Ibnu Maalik. Looma kala harin dagaalka.
Nebigii markuu dhintay waxaa meeshiisii kasii socday jihaadkii. Waad xasuusataan Carab iyo Abuu Bakar Alla haka raalli noqdee waxa kala raacay. Waad xasuusataan khatarta la galay haddaan Ilaahay Abuu Bakar ku camayn ama ku xifdin diintiisa. Waad xasuusataan maalinkaas shakiga galay halyeygii Cumar al-Faaruuq Alla haka raalli noqdee.
Markii Abuu Bakar birta ka aslay qoladii tiri zako bixin mayno in Cumar yiri “Abuu Bakarow ma waxaad laynaysaa dad ashahaadanaya?” Xaggee Ina Abyad joogaa?
Laakiin Shiikh Cabdiraxmaan waa ka hoosbaxday ee igama aqoon yara aniga! Alla hana sugo annaga iyo asagaba, waxaan ku aqaannay nin khayr jecel. Wuxuuse ku dhacay god loo qoday oo uusan hoos u fiirin salkiisa iyo waxa ka ratibmaya.
Saxaabadii Alla haka raalli noqdee dhammaantood way guteen waajibaadkoodii. Diintii waxay gaarsiiyeen daafaha adduunka. Waxay ku gaarsiiyeen seef iyo xikmad isla socota. Waxaa wax lala yaabo ah warka Ictisaam iyo kuwa haziimadu ku dhacday. Horta hubkii bay iska dhigeen oo ka fogaadeen, waa dambi ay galeen! Waxay dheheen dacwadaan fidinaynaa oo waxaan gaarsiinaynaa daafaha adduunka sidii saxaabaduba u gaarsiiyeen. Waxay dheheen diintu seef kuma fidin ee waxay ku fidday dalxiis iyo ganacsi. Bal ka dhagaysta Shiikh Cabdulqaadir Nuur Faarax arrintaas ha idiin faahfaahiyee.
Dad baa laga yaabaa inay u qaataan waxa aan sheegayo inay dacaayad tahay! Ufiirsada culumada Ictisaam waxay samaynayaan. Adduunka oo dhan ayay kusoo wareegaan saacado yar. Waxay dadka ugu sheekeeyaan dacwaan fidinaynaa. Masaajid ayaga u khaas ah oo ay waddan walba ka samaysteen ayaa lagusoo dhaweeyaa. Wuxuu wataa wadaadku mashruuc asaga u gaar ah oo ganacsi ah iyo mashaariic kale.
Kalimaad ayuu jeediyaa mashruuciisa ku aaddan ama waxtar u leh. Lacag ayuu yaboohiyaa ama dadka waydiiyaa oo qolooyin ayaa heshiis la gala oo ku dhaha lacag noo uruuri waxaan ku siinaynaa barsanteej ama nisbo mucayyan ah oo laga bixinayo lacagtaas la yaboohinayo. Markii ay soo xarootay lacagtii la yaboohiyey ayaa wadaadkii wax yaboohiyey waxaa lacagtii laga siinayaa boqolkiiba-20. Intaas waxaa u dheer tigidkiisa, cuntadiisa, hoteelkiisa iyo khidmadiisa intuu joogo ama hadiyado qaali ah. Dadku waa xishoonayaan oo wadaadka kuma dhiirran karaan laakiin khaladka way arkaan iyo waxa la isdabamarinayo!
Waxay nusuus u raadiyaan inaan diintaani u baahnayn wiil yar oo qori la ordaya ee ay u baahan tahay dagaal la’aan in la fidiyo oo adduunka la gaarsiiyo ayadoon dhiig daadan! Fiicnaan lahaydaa oo dhib yaraan lahaydaa haddii saas la helayo. Laakiin waa mustaxiil arrintaasi horana uma dhicin dibna uma dhici doonto diin aan dhiig ku daadan ayaa muxaadaro iyo dalxiis ku nabadgalaysa ama ku fidaysa!
Ictisaam waxba yeysan diin nabadgalin ayagu ha nabadgalaan! Maalin walba yaan mooryaantu suuqa ku jiidin oo xabsiyada laga buuxin culumadooda iyo ardaydoodii jihaad-diidka ahaa. Diin yaysan difaacin ee ayagu ha is difaacaan. Dadka akhlaaq ha u muujiyeen lagu aamino. Maalin walba waxaa lagu dhaggan yahay wadaad Ictisaam ah oo la leeyahay wuxuu lunsaday malaayiin doollar oo uu dadka kasoo uruuriyay oo uu yiri waan idiinku shaqaynayaa. Sow ma xasuusataan Fulaan iyo Fulaan iyo Fulaan oo lunsaday malaayiin hanti ah? Shirkad hebla aaway? Tii kale aaway? Aaway hagbaddii haweenka? Aaway lacagihii magaca agoomaha iyo mujaahidiinta lagu aruurin jiray?
Kuwo cusub ayaa hadda soo baxay oo la yiraahdo Bushra iyo Islii Mool magacyo saas ah oo ay leeyihiin culumada ugu waawayn Ictisaam. Bannaankay wareegayaan oo habrihii Soomaaliyeed ee qoxootiga ku ahaa gaalada dhexdeeda ayay kasoo uruursadaan xoogow hagbad ah ama ayuuto oo ay is dheheen ilmihiinna wax ugu qabsada. Waxaa isku xiran oo wada ganacsada saddex qolo:
Ragga ganacsiga wada oo mashaariicda gacanta ku haya
Ragga masaajidda gacanta ku haya oo aan laga baddali karin waligood
Qolada tiifiiga oo ayagu qayb libaax ka qaata xayeysiiska ganacsiga wadaaddada. Qolooyinka tiifiigu ayagu waxay helaan dhaqaale aan caadi ahayn oo habeen kasta waxaa usoo xaroota lacag xad dhaaf ah. Waxay ku liibaaneen wadaaddada oo hadda haya hawshii wariyuhu qaban jiray. U fiirsada meeshii wariyuhu fariisan lahaa waxaa fadhiya wadaad Ictisaam ah wariyihiina wuxuu ku jiraa nasiino iyo kafee cabid.
U fiirsada wadaaddadii waxay noqdeen aalad ganacsiga lagu xayeysiisto. Meel ayaa laga furayaa dukaan lagu gado biitsada. Waxaa tiifiiga ka sheegaya oo xayeysiinaya wadaad Ictisaam ah. Meel ayaa laga furayaa dukaan lagu gado waxyaabaha la isku qurxiyo, waxaa tiifiiga ka sheegaya wadaad Ictisaam ah. Meel ayaa laga furayaa dukaan tigidhada gada, waxaa tiifiiga ka sheegaya wadaad Ictisaam ah. Ganacsiga Yurub iyo Ameerika waxaa lagu xayeysiin jiray gabdho. Gabdhihii hadda waa nasteen oo rag ayaa baddalay ayagii ka nafci badan kana aftahansan meel dhawna dadkii wax ka tusaya.
Fiiro Gaar ah: Shir ayaa lagu qabtay magaalada Landan muddo laga joogo wax sanad ka yar. Shirkaas waxaa soo qabanqaabiyay wadaadka lagu magacaabo Shiikh Muxamed Idriis. Shirku wuxuu u dhexeeyay laba qoloo muuqata iyo qolo qarsoon oo ayaga loo shaqaynayay ama nuxurka shirka lagu raalligalinayay, waxayna kala ahaayeen:
Ictisaam oo huwan magaca midowga masaajidda Ingiriiska.
Telefishinka Yunifersal (Universal TV) oo huwan magaca warbaahinta Soomaaliga ku hadasho.
Sirdoonka Ingiriiska Em.Ay.Fayf (MI-5) iyo kan Maraykanka Sii.Ay.Ee (CIA).
Shirkaan saddexda qolaba waxay isku waafaqsanaayeen in lagu cunaqabateeyo oo looga hortago dhaqaale ay ku uruursadaan culumada mujaahidiinta Soomaaliyeed oo aan la aqoon qaabka ay u shaqeeyaan iyo meeshay dhaqaalaha ka helaan intaba. Saddexda qolo, qola walba waxaa ugu jiray heshiiskaan dano ayaga u gooni ah, khaasatan waxaa faa’iido badan ku gaaray tiifiiga iyo Ictisaam oo dhaqaale badan ku aruursada ganacsigoodana ku xayeysiista.
Xogwarran Dhab ah: Rumayso Waa Rune
Muddo yar kahor waxaan ahaa wadaad Ictisaam ah. Waxaan la shiri jiray raggayga, waxaan la sheekaysan jiray raggayga, sirta la igama qarsan jirin oo waxaan ahaa xubin ka tirsan ururka. Sheegi maayo wax badan oo aan ogahay oo haddaan sheego aad loo qariibsanayo ama aan la iga rumaysanayn. Waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo oo kaliya hadallo aan ku doodnay culumada Ictisaam rag kamid ah iyo shakiga ay ka qabaan mujaahidiinta intuu le’egyahay iyo siduu u gurracan yahay ama u foolxun yahay.
Waxaan doodnay wadaad hebel oo haddaan sheego magiciisa aad wada garan doontaan. Waxaan doodnay mid kale oo asagii ka macruufsan ama dacwada uga horreeyay. Waxaan la sheekaystay ducaadda iyo ardayda Ictisaam ee mujaahihiinta kasoo horjeeda ama jihaad-diidka ah. Ayagu waa weerar anna waxaan ahay difaac. Hadalladoodii ay mujaahidiinta ku durayeen waxaa kamid ahaa takfiir, Khawaarij, shisheeye, sufaho, mooryaan iyo wixi la mida. Intaas oo dhan lama yaabin oo waa warkii odayaasha Ictisaam nagu akhriyeen. Waxaan la yaabay oo ii cuntami waayay in la igula doodo Shabaabku waxay u shaqeeyaan Maraykanka iyo Yuhuud. Waxaa ii cuntami wayday in la igula doodo, “Yaa wax siiya? Xaggee bay ka helaan dhaqaalaha haddaan Maraykan wax siin?” Waxaan la yaabay markii la igula dooday, “Haddaysan Maraykan u shaqaynayn muu baabbi’iyo muxuu u fiirsanayaa waa kuwaan meel walba qabsanayee?”
Ereyadaas doqonnimadu ka muuqato iyo xasadku aniga wax bay ii tareen. Waxaan ku baraarugay dadka aan dhexjoogo iyo siday u fakarayaan. Waxaan fiiriyay meesha gaalo iyo Muslim isla marayaan iyo waxa daafaha adduunka ka dhacaya. Waxaan ku baraarugay musiibada ku habsatay tayaarkii aan ka tirsanaa oo aan kusoo dhex barbaaray oo ay kamid yihiin macalimiintaydii iyo ardaydii aan isku looxa ahayn. Dib ayaan u faagay duruustii aan qaadan jirnay. Waxaan arkay kitaabkii oo waddada toosan qaaday iyo anoo wadda kale oo qalloocan qaaday, waddadii Murji’ada iyo Suufiyada.
Diintaan ama jihaadkaani wuxuu soo maray xilli Islaamku dunida ka talinayay sanado fara badan. Diyaarado la raaco, mashaariic khayri ah, muxaadaraad iyo dalxiis laguma keenin. Rag baa usoo dhammaaday oo naftoodii iyo maalkoodii u huray.
Rasuulku waxa uu tilmaamay boqolkii sanaba mar in Ilaahay diintaan mid cusboonaysiiya usoo saarayo. Marka laga yimaado saxaabadii iyo jiilkii ku xigay, waxaa kamid ahaa raggaas diinta tadxiyada usoo sameeyay ama naftoodii u huray:
Imaam Axmed Binu Xanbal
Shaykhul Islaam Ibnu Taymiyah
Imaam Muxamed Cabdiwahaab
Maxaa diidaya haddaan niraahno Imaam Usaamah Binu Laadin? Ma rabo inaan meel fog idiin celiyo oo waad ogtihiin taariikhda Islaamku soo maray ama dacwadu. Waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo dhacdadaan hadda aan gacanta ku hayno oo ku saabsan jihaadka Soomaaliya iyo marxaladuhuu soo maray.
Ikhwaanii waxaan wax kasoo tilmaamay dhibaatadii ama luggooyadii loo gaystay mujaahidiintii Soomaaliyeed ama jihaadkii Soomaaliya. Waxaan joognaa xilligii aan ogaan lahayn: Yaa xaq wada yaase baadil wada? Yaa jihaadku run ka yahay yaase khayaamo iyo been ku dhex wada? Yaa jihaadkii ku faa’iiday oo meel fiican gaarsiiyay bulshadiina u daneeyay oo daalimiintii ka qabtay, yaase khasaaray oo saaxadii ka baxay Muslimiintana garabkoodii ka baxay gaalna isu dhiibay? Odayaasha Ictisaam aad ayey u jeclaayeen dhalinyarada iyo hawshay hayeen sidii hadda noo muuqatay. Wax baase qarsoonaa Ilaahay kashifay.
Goormay Billaabatay Dacaayadda iyo Dagaalka aan ka-Fiirsiga Lahayn?
Dagaalkaan iyo dacaayaddaan aan kala go’a lahayn oo ay wadaan culumada iyo ardayda Al-Ictisaam waxay billaabatay maalinkii ducaaddu ama mujaahidiintu ay la bexeen magaca Shabaabul Mujaahidiin. Shabaabku ma baddalin manhajkoodii, mana baddalin akhlaaqdoodii, mana baddalin himilladoodii jihaadiga ahayd. Waxay baddaleen oo kaliya siyaasaddii ama qaabdhaqankii jihaadka.
Maxaa kallifay arrinkaas? Waxaa kallifay dhibaataday kala kulmeen maamulkii Al-Itixaad iyo Ictisaam iyo khiyaamooyinkii loo gaystay jihaadka iyo ehelkiisii. Mujaahidiintu waxay sameeyeen baaritaanno qota dheer iyo samir ay ku ogaadaan waxa khaldan iyo meesha khaladku ka imaanayo. Xalkiina wuxuu noqday in la baddalo siyaasaddii jihaadku ku socday ama waddadii ama hoggaankii taad dhahdaba.
Maxaa Laga Faa’iday Siyaasaddii la Baddalay?
Waxaa laga faa’iiday in laga adkaaday jawaasiistii, in la helay nabadgalyo, inuu bannaanka usoo baxay manhajka khaldan ee Ictisaam. Waxaa laga faa’iiday in la helay dawlad Islaam ah oo fulinaysa shareecadii Islaamka oo haysata Soomaaliya inteedii badnayd.
Culumada Maxaad ugu Diiddeen inay Yimaadaan Saaxada Jihaadka?
Looma diidin, bal waan ugu yeeraynaa inay noo yimaadaan oo ay hoggaamiyaan jihaadka. Waxaan maqalnay ama culumadu yiraahdeen, “Haddaan saaxada tagno waa nala dilayaa!” Subxaanallaah! Haadaa buhtaanun cadiim! Ma aanan oran waana been cad.
Ikhwaanii ma illaawin inaan xuso waxqabadkii iyo dagaalladay galeen Shabaabku.
Waa inoo qormada dambe inshaa Allaahu.
10/03/2014 Masoo Gaadhay Gaal iyo Wadaad Gaadh Uwada Taagan?Abuu Ibraahiimmaamule
Ikhwaanii waxaan kala tagnay ayadoo lagu jiro shir. Shirku wuxuu ku saabsanaa magaalada Kismaanyo in gacanta loo galiyo mooryaantii magaalada laga qabsaday ehelladoodii ama duqowdoodii. Waxaa qabiilka ergo ka ah oo gogosha dhigay ururkii Al-Ictisaam culumadoodii. Culumada warkoodu wuxuu leeyahay saddex waji:
Maamul wanaag iyo maslaxatu-dacwa.
Qabiil iyo masaalixu-dacwa (tanaasul)
Siyaasad qarsoon oo gaalo loogu adeegayo ama hala ogaado ama yaan la ogaan.
Aan in yar dib u noqonno. Dagaalku wuxuu ka billawday magaalada Xamar. Wuxuu marayaa Kismaanyo. Dhanka waqooyi wuxuu gaaray dagaalku illaa iyo Baladweyne. Dhankaan qorrax u dhaca wuxuu kusii dhawyahay dagaalku Baydhabo. Waddanka intaas baaxad le’eg ducaaddu kama taliyaan hal magaalo marka laga reebo Kismaanyo oo aan hadda dhextaagannahay oo la isku haysto oo la leeyahay dhiiba iyo dhiibi mayno.
Waxay horay usoo dhiibeen dhawr iyo tobankii dagmo ee Xamar. Waxay dhiibeen laga billaabo Balcad illaa Baladweyne. Waxay dhiibeen laga billaabo Afgooye illaa Buurhakaba. Waxay dhiibeen laga billaabo Shalaanbood illaa Jilib. Libaax daalay dirirtiisaa loo tagaa. Waxay marayaan baddii Kismaanyo ama xuduudbeenaadkii Keenya. Maxaa haray oo ay xukumi doonaan? Mise ayaga xukunka waa laga ilaalinayaa?
Inta magaalo aan soo marnay oo laga xorreeyay mooryaantii ama murtaddiintii waxay dib ugu laabatay magaalo walbaa gumaysigii laga saaray shalay. Waxaa qabsaday balaayo ka daran kuwii laga qaaday. Waxaas oo mu’aamaraad ah waxa maleegayaa waa Ictisaam. Doqontaan afka guduudan (Shariif) waxba ma oga. Waxaa macallim u ah rag birta calashaday oo yaqaan dawlad Islaami ah oo dhisan sida loo kala diro.
Ikhwaanii Kismaanyo in lagusoo duulo oo la qabsado la iskuma waafaqsanayn. Waxaa diiddanaa dhammaan odayaashii Ictisaam. Waxaa diiddanaa ducaaddii gobolka u dhalatay intii Ilaahay u naxariistay mooyee. Waxaa diiddanaa rag badan oo mujaahidiin ah oo ay haysay qaflatu-saalixiin ama wadaad war-mooge ah. Waxaa go’aanka lahaa lagu weeraray Kismaanyo ducaaddii jihaad-doonka ahayd oo kaliya.
Go’aankooda ma ahayn mid degdeg ah. Waxaa ka horreeyay shirar aan loo kala kicin. Waxaa ka horreeyay takhdiid iyo maxay kula tahay. Waxay ducaaddu tashi ku gaareen inay ku dhawaaqaan maamul ayaga u gooni ah intaysan Kismaanyo qabsan.
Waxay isku raaceen wixii hadda ka dambeeya meeshay qabsadaan inay maamulkeeda ayagu hayaan dadkana u khidmeeyaan duullaankana sii wadaan intay Alaska ka gaarayaan ama ay ka shahiidayaan.
Duullaanka Kismaanyo waxaa soo dadajiyay akhbaar ay soo gudbiyeen wardoonkii mujaahidiinta. Wardoonku waxay ogaadeen gaaladu inay duullaan kusoo tahay magaalada Kismaanyo oo istaraatiiji ah. Waxay gaalo iyo jawaasiistii u shaqaynaysay go’aan ku gaartay in mujaahidiinta laga ilaaliyo meelaha badda leh inay qabsadaan ama xoog ku yeeshaan sida Kismaanyo, Xamar, Marka iyo meelaha kale ee badda leh.
Dagaalka ay wadeen ducaaddu wuxuu ahaa mid ku wajahan Soomaaliya gudaheeda. Dadka jihaadka waday ama laga amarqaadanayay waxay ahaayeen Soomaali. Culumada marjica u ahayd camalkaas waxay ahaayeen Soomaali. Shirkaas ducaaddu gashay laga billaabo waxaa laga dhigay jihaadku inuu yahay mid caalami ah. Waxaa loo bandhigay culumada caalamka oo dhan ama Islaamka. Waxaa loo bandhigay ciddii imaanaysa ama jihaad-doon ah inay kusoo dhawaato gacmo furan. Gaalaba is bahaysataye maxaa noo diiday inaan is bahaysanno?
Waxay go’aansadeen mar haddii culumadii Soomaaliya ay jihaadkii diideen oo wanaaggii mujaahidiintu gaaraanba ay burburinayaan, dhaqaalihiina ay ka goosteen, jihaadka laftiisiina ay shubho ku fureen oo mujaahidiintii safka ku jirayna ay khalkhal ku abuureen, walaaluhu waxay taladoodii u bandhigteen caalamul Islaam inay la midoobaan xag ciidan iyo xag dhaqaala intaba.
Wixii diin ah oo ishkaal ka galo inay fatwo waydiiyaan culumada Rabbaaniyiinta ah ee camalkaan ku takhasustay. Hadday dhaqaale u baahdaan inay waydiistaan walaalahooda Muslimiinta ah ee jecel inay camalkaan ku bixiyaan dhaqaalahooda. Hadday ciidan u baahdaan inay u qayshadaan ama gargaar warsadaan caam ahaan Muslimiinta meel kasta oo ay joogaan.
Waxaan shaki ku jirin wadaadka qaba in Soomaaliya Soomaalida loo daayo (culumada) inuu yahay laba midkood:
Ahbal dhaga waawayn oo hurguma dila ah (kuwa naagaha jecel)
Inuu yahay jaasuus nalagu dhex koriyay oo dhogor Islaam leh
Maxaa yeelay Islaamka waxaa lagu fahmaa ama uu kusoo dagay luuqadda Carabiga. Haddii laga ilaaliyo dacwada Soomaaliya ka socota ducaadda ku hadasha afka Carabiga see loo fahmayaa diintii iyo axkaamteedii? Ictisaamku waxay Shabaabka ku haystaan waxaad culumo ka dhigateen culumo aan Soomaali ahayn. Waxay ula jeedaan culumadaas culumada Carbeed ama caam ahaan Muslimiinta kuwooda Rabbaaniyiinta ah laakiin aan Soomaali ahayn. Islaamku ma Soomaali baa mise waa qofkii Alle u hoggaansamay?
Maya. Habar dhali wayday aleelo ku waalatay. Hashii maqaarka diidaysaa meelo daloolay ka fiirisaa. Arrintaan Ictisaamku markay ka hadlayaan waxay huwiyaan shaar diineed. Dhawr shaar ayay u xiraan markay juhalada la hadlayaan ama shubhadooda, waxaana kamid ah shaararka kuwaan: Shaarka koowaad waxaa lagu xardhaa erayga ah “Waxaa qawm walba loo diraa nin afkooda ku hadlaya (walaalkood).” Shaarka labaad waxaa lagu xardhay kalimadda ah “Reer Maka ayagaa yaqaan buurahooda iyo waxa ku dhexjira. Ahlu Maka adraa bi shacaabihaa.” Waxay ula jeedaan ereyadaas oo dhan marka lasoo uruuriyo nimanka Carbeed Soomaaliya waxa ka dhacaya waxba kama oga. Adigu waxaad tahay Soomaali, waxaad ku jirtaa gurigaaga, waxaa lagaa kari la’yahay kaalay imow goobta jihaadka oo fiiri waxa ka dhacaya. Waa diidday oo marna diyaarad baad saaran tahay marna hoteel baad ku raaxaysanaysaa marna aroos baad ku jirtaa oo hablo yar yar baad hadba mid ka dooranaysaa (tacaddudu-zawjaad). Adiga iyo ninka Carbeed waa u siman tihiin xog la’aanta ka jirta Soomaaliya iyo waxa ka dhacaya goobta jihaadka. Maxaa adigana ku siiyay fursadda aad wax walba kaga jawaabayso wadaadka Carbeedna u diiday inuu ka jawaabo haddii mas’alo diini ah la waydiiyay oo waliba asagu yahay nin diinta ku fahmay luuqadday kusoo dagtay diintu oo Carabi ahayd? Asagiina waa Carab.
Dulmiga intaas ka wayn wuxuu yahay, waxaad tahay nin Cajami ah oo aan luuqadda Carabiga lagu habin ama lagu korin. Waxaad soo baratay xoogow aad xalaasha iyo xaraamta ku kala garato haddaad xaq-doon tahay. Mucalimkii ku baray ereyadaan tirsan ayaad ku leedahay ha dhagaysanina warkiisa. Waxaad leedahay ma uusan fahmin diinta iyo axkaamul jihaad ee anaa garanaya. Waxaad leedahay mucalimka Carabiga i baray anaa ka badiya Carabiga adoo ah nin Cajami ah. Soomaali cunsuri ah!
Cabdiraxmaan Abyad muxuu ku fahmay diinta uu ku difaacayo culumada Ictisaam? Ma leeyahay asagu culumo Carbeed oo uu diinta kasoo bartay si toos ah? Ma laga yaabaa inuu ku dhashay waddammada Carabta oo uu sidaas Carabiga ku bartay? Maya, shiikhu wuxuu ku dhashay Soomaaliya, dhul Carbeedna kuma barbaarin.
Ma tagay carro Carbeed oo Carabi makasoo bartay ama culuum kale? Maya, waxaa mucalim u ahaa arday Soomaali ah oo Carabta wax kasoo baratay. Muxuu ka rabaa culumada Carbeed oo mucalimiintiisa wax soo bartay? Culumadiisuu ka qaatay darsigaas xushmadarrada ah!
Musiibada intaas ka wayn waa midda haysata Ina Abyad. Abyad wuxuu ku dhashay meel Ilaahay iyo Rasuulkiisii (sallallaahu calayhi wasallam) lagu caayo har iyo habeenba. Maalin qur ah intuu Ilaahay dartii u xanaaqay qori ma qaadan oo ma dagaallamin. Wuxuu waa hore (1992) kasoo horjeeday kuwii inta Alle dartii u xanaaqay dagaalkana la galay mooryaantii Ilaahay iyo Rasuulkiisii (sallallaahu calayhi wasallam) dhibayay oo caayi jiray har iyo habeenba.
Shiikh Abyad inta uu ka tagay dhulkuu ku dhashay oo ay dagganaayeen dad Ilaahay iyo Rasuulkiisa dhibay, in Ilaahay u naxariistay mooyee ayuu wuxuu tagay ama la darsay oo hadda daggan yahay kuwo gaalo ah oo waagii baryaba Ilaahay iyo Rasuulkiisii caayaya. Hal maalinna intuu xanaaqay ma uusan dagaallamin mana difaacin Alle iyo Rasuulkiisii. Waddankee shiikhu joogaa? Wuxuu joogaa Denmaak. Oo kuwaasi waaba gaalee maxaa ka dhexeeya oo uu ula dagaallami waayay? Baasaboorkii ayuusan wali qaadan. Oo miyaan loo akhrin wadaadka kutubta al-Walaa wal-Baraa oo culumada iyo qabyaaladda ama gaalada iyo Muslimiinta kala saarta? Kutubtaas hadda lama akhristo oo waa la qariyay! Maxaa dhacay waaba kutub fiicane oo loo qariyay? Culumadu (Ictisaam) waxay dheheen dhalinyarada yaan loo akhrin kutubtaas maxaa yeelay waxay ku dhacayaan takfiir. Oo see ugu dhacayaan takfiir? Waxay dheheen kutubtu waa kutub fiican oo caqiido ah qofkuna uusan Islaamka fahmayn illaa uu kutubtaas akhristo.
Haddana in la qariyo waxaa ku jirta maslaxatu-dacwa oo dhalinyaradu hadday si dhab ah u fahmaan caqiidadii Shiikh Muxamed Cabdiwahaab, qabyaalad iyo murtaddiin iska daaye annagay na takfiirinayaan (culumada Ictisaam). Marka intay yaryar yihiin oo ay ka gaarayaan sano lixdan halaga qariyo ayaan ku heshiinnay! Lixdan jir muxuu qaban karaa? Ma naqaan waxay na dheheen maslaxaddaa ku jirta ee dan kale lagama lahayn! Dhalinyaradu intay takfiir noqon lahaayeen sidaanaa dani ugu jirtaa.
Takfiirna maxaa la yiraahdaa? Takfiir waxaa la yiraahdaa qofka Islaamka ah oo gaalnimo ku dhaca ama sameeya wuxuu ku gaaloobayo oo la yiraahdo waad gaalowday ama waxaad ku dhacday gaalnimo. See loo gaaloobaa, Soomaaliduse ma gaaloobi kartaa? Haa, qofku qabiilkuu doono ha ahaado asagoo Muslim ah ayuu gaalnimo ku dhici karaa ciyaadan billaahi. Waxaana gaalnimada soo jiida saddex arrimood:
Inaad afka kaga dhawaaqdo gaalnimada.
Inaad qalbiga gashato inaad gaal tahay afkaba hakaga dhawaaqine.
Inaad jawaarixda (gacmaha iyo lugaha) ka samayso wax lagu gaaloobo adoon cudurdaar lahayn intaba waa lagu gaaloobaa!
Carrabka iyo qalbiga gartay, lugaha iyo gacmuhu maxay galabsadeen? Haddaad gaalo Muslimiinta kusoo duushay soo raacdo oo Muslimiintii wax ka layso waad gaaloobaysaa adoo Muslim Soomaali ah. Waa yaab saas ma moodi jirin culumaduna sidaas wax nooguma sheegin. Waxay na dheheen culumadu qofkii gaalnimada qalbiga ka rumeeya ayaa gaaloobaya oo kaliya.
Waxay kaloo na dheheen qofka Muslimka ah gaalnima kasta oo uu ku dhaco gaaloobi maayo mar hadduusan gaalnimada galbiga ka rumayn! Arrintaasu ma sax baa? Maya, waa khalad arrintaasi, waxaana qaba arrinkaas nimanka la yiraahdo Murji’o. Murji’adu waxay qabtaa qofkii yiraahda Laa ilaaha illa-llaahu Muxamadu rasuulullaahi in uu leeyahay iimaanka Malakul Jibriil oo kale waligiisna uusan gaaloobayn.
Salafkii waxay qabeen in qofka Muslimka ah Islaamku ka burayo sida waysaduba uga burto ama ha ogaado ama yuusan ogaanin. Ictisaamku soo Salafu Saalix ma ahan illayn ayagaa noo sheegay arrintaan ah inuusan qofku gaaloobayn hadduusan xalaalsan gaalnimada? Hadda ka hor way ahaan jireen Salafu Saalix laakiin intay qaateen magaca Ictisaam waxay qaateen manhajka Salafiya Jadiidiya oo way baddaleen Salafu Saalix manhajkiisii toosnaa. Waxay u dhawyihiin kii Murji’ada.
Akhristayaalow raalli iga ahaada, su’aalo ayaan ka jabaabayey. Aan kusoo noqonno Kismaanyo.
Ikhwaanii shirkii Kismaanyo waa lasoo gabagabeeyay. Shirku wuxuu ku saabsanaa gogol loo dhigtay Shabaab oo la yiri magaalada soo wareejiya. Wuxuu shirku dabasocday ama codsigu kuwii hore oo markay Shabaabku magaalo qabsadaan la oran jiray soo wareejiya magaalada maamulkeeda.
Shabaab waxay ku jawaabeen maya diidnay inaan magaalada wareejinno! Waa markii koowaad oo ducaaddu ama Shabaabku ay culumada ku yiraahdaan diidnay! Walaalayaal waxaan soo marnay goobo badan oo ducaadda lagu yiri soo wareejiya waxaad haysaan oo maamul ah. Waxaa lagu yiri marar badan dhiga hubkaad haysaan. Waxaa lagu yiri nin walbaa ha aado qabiilkuu ka dhashay. Waxaa lagu yiri arrintaan dacwada maslaxo uguma jirto ee ka fogaada. Waxaa lagu yiri reer hebel jihaadkoodu ma bannaana.
Intaasoo dhacdo iyo kuwo aanan ka sheekayn karin oo farabadan ayay aqbali jireen oo ay dhihi jireen samicnaa wa adacnaa. Mar walbana waxay ahaayeen ducaad wanaagsan oo culumadooda waxay sameeya yiraahdaan sameeya. Culumadu raggaas waxay u taqaannay mujaahidiin, ducaad wadda fiican ku socota, jiil wanaagsan iyo wax la mida. Maalinkaas ay Kismaanyo ku yiraahdeen bixin mayno magaalada oo annagaa maamulayna ayay noqdeen Khawaarij, takfiir, sufaho, ajnabi, qar-iska-tuur, culumo-diid, maangab iyo wixi la mida.
Soo uma eka dhacdadii ku dhacday Cabdullaahi Ibnu Salaam Alla haka raalli noqdee. Markuu soo islaamay ayuu Nebi Muxamed (sallallaahu calayhi wasallam) uyimid. Wuxuu yiri “Rasuulkii Allow waan soo islaamay.” Rasuulku wuu soo dhaweeyay. Cabdullaahi wuxuu yiri “Rasuulkii Allow intaysan Yahuuddu maqal islaamnimadayda u yeer kuwooda wax garanaya oo waydii sidaan dhexdooda ku ahay? Nimanku waa xaasid oo ma taqaanid anigaa kaa aqaan oo waa niman aan khayr cidna u oggolayn.” Waa loo yeeray. Cabdullaahina wuxuu galay ama ku dhuuntay Nebiga gadaashiisa. Wuxuu waydiiyay su’aal ah: “Ka warrama Cabdullaahi Ibnu Salaam?” Waxay dheheen, “Waa ninka noogu khayr badan. Aabbihiisna wuxuu ahaa ninka noogu khayr badan. Reerkooda oo dhanna waa reer khayrqabayaal ah.” Wuxuu yiri Nebigu “Ka warrama hadduu islaamo?” Waxay dheheen “Nacuudu billaahi. Allaan ka magan galnay.”
Intuu soo baxay Cabdullaahi ayuu ashahaatay oo wuxuu yiri, “Maanta laga billaabo waxaan qaatay diinta Islaamka.” Waxay dheheen ayagoo meeshii fadhiya: “Waxaad tahay kan noogu khayr daran. Aabbahaana wuxuu ahaa kii noogu xumaa. Reerkiinna oo dhanna khayr ma lihidin.” Hadal sidaas oo kale ah.
Ictisaam ayagoo meeshii fadhiya ayay afka qaylo ku dhifteen oo kor ugu qayliyeen: “Hayaay! Hayaay! Hayaay! War saaxadii Soomaaliya waxaa qabsaday takfiir iyo Khawaarij. Waxaa nagu habsaday shisheeye, culumadii baa la caayayaa, dadkaa jeegada laga gawracayaa!” Waxay sheegayaan oo xumaan ah saacado kahor majirin! Ictisaam iyo Shabaab waa iska warqabaan waxa ka dhexeeya oo waa awliyadii habaynkii is arki jirtay. Waxaa meesha ku luggo’ay diintoodiina shaki ka galay ducaaddii diciifka ahayd xagga diinta iyo xagga caqliga intaba, qabiilkuna ku jiray.
Tusaale: Waxaad arkaysaa wadaad maalin mujaahidiinta la socda, maalin Ictisaam la socda, maalinna labadaba ka dhex baxaya oo leh waa na wareeriyeen ee xaggee aadnaa? Cidi kuma wareerin ee adaa wareersan! Waxaa kaa khaldan miisaanka aad wadato oo hadba qolo saarayso. Shabaab ha raacin Ictisaamna ha raacin! Waxaad raacdaa xaqa! Markaad xaqa raacdo asagaa ku tusi cidda toosan iyo cidda khaldan.
Culumada Ictisaam iyo mujaahidiinta midna ha raalligalin ee Ilaahaygii ku abuurtay raalligali. U dagaallan oo u xanaaq Allihii ku abuurtay ee ha u dagaallamin wadaad asaga la abuuray oo aan meel ku sugnaanayn ama khaldami kara oo bashar ah. Raac kitaabka iyo sunnada ee ha raacin manhajka muxdithka ah ee gaalada loogu adeegayo. Intaas oo dhan haddaad diiddo, diintu ma khaldanee adaa khaldan. Ha diidin daliilka diinta sidii duqowdii horeeto (Suufiyo) iyo kuwa dambe (Ictisaam).
Magaalada Kismaanyo waa magaalo sidee ah? Magaaladu waa magalada ugu khayraadka badan waddanka Soomaaliya oo dhan. Sababtuna waxay tahay, waxay kulansatay waxyaabaha banii-Aadamku ka faa’iidaysto oo dhan, sida badda, wabiga, dhulbeereedka, xoolaha nool iyo macdanta intaba. Waxaad la socotaan inay Keenya boob ku hayso shidaalka ka buuxa dhulka Kismaanyo iyo badaheeda ceegaaga. Magaalada Kismaanyo qofkii yaqaan kama xiisadhigayo sheekadeeda iyo xusuusteeda intaba. Aan wax yar ka tilmaamo.
Kismaanyo meel u jirta qiyaastii 40 kiilomitir oo ka xigta dhanka waqooyi waxaa mara dhul baraha. Waa tuulada lagu magacaabo Saguuni. Isla dhanka waqooyi waxaa ku yaal ama mara wabiga Jubba oo wuxuu badda kaga daraa meel Kismaanyo u jirta dhawr iyo toban kiilomitir. Meeshay isaga daraan badda iyo wabigu waxaa ku yaal tuulada la yiraahdo Goobwayn. Goobwayn wabigaa dhex mara.
Waxaa ku yaalla meelo dhismayaal qadiimi ah oo Ingiriisku fadhin jiray oo qalcado ku lahaan jiray muddo boqolaal sano ka hor ah. Waxaa la yiraahdaa Sabca Asharaaf meesha dhismuhu kuyaal oo Goobwayn waxay ka xigtaa dhanka bariga ama qorrax kasoo baxa. Waa dhul haddaad ku dhex lugayso aadan ka daalayn aragtidiisa. Aad buu u qurxanyahay oo waa meel loo dalxiis tago.
Waa dhul aad u sarreeya oo markaad korkiisa istaagto waxaa kuu muuqanaya baddii oo aad u xasilloon. Waxaa kuu muuqanaya wabigii oo aan badda ka yarayn waynankiisa. Waxaa kuu muuqanaya beerihii oo aad u cagaaran. Waxaa kuu muuqanaya xoolihii noolaa oo dhul burun-burcood ah daaqaya oo markaad suunta kasoo baxaysa ama caraftooda aad sanka la raacayso oo aad moodayso inaad ku dhex jirto dukaammada cadarrada gada. Alla yaa u sheega Soomaalida ku baabba’day qurbaha?
Waxaa intaas kuu dheer shimbiraha codkooda kala noocnooca ah oo Ilaahay caabudaya. Wallaahi waan tagay meeshaas aan ka sheekaynayo igamana ahan mala awaal iyo been abuur toona. Waxaan ku arkay dhismayaal aad qadiim u ah. Waxaa la ii sheegay inay ahaan jirtay meel xarun wayn ay ku taallo oo dhulkaan oo dhan looga talin jiray (Ingiriis).
Kismaanyo dhankeeda waqooyi oo aan hadda ka ishaaray wabiga iyo Sanguuni oo dhul baruhu maro, waxaa intaas u dheer kulli waa dhul-beereed. Waa dhulkii Soomaali oo dhan ay ku lahayd aseendooyinka iyo beeraha waawayn. Dhulkaasi ama beerahaasi waxay gaaraan illaa iyo Gedo ama Jubbooyinka oo dhan. Kismaanyo dhanka koonfureed waxaa ka xiga badda. Waxay leedahay dakad wayn oo markiiba ay kusoo xiran karto dhawr markab. Waxay leedahay haamo waawayn oo lagu kaydiyo shidaalka ama kayd shidaal. Magaalada ciiddeedu waa ciid aad u nadiif ah ama ciid cad, wasakh maleh.
Waxaa dhex daaqa ama kusoo xerooda magaalada dhexdeeda xoolaha nool sida geela, ariga iyo lo’da. Waxaan garanayaa geelu suu dhirta u daaqayo markuu kululaado inta badda tago kusoo qabaysta ama isku qaboojiya. Dad baan ka maqlay geelaasi kalluunkuu cunaa. Geela waxaa lahaan jiray nin la yiraahdo Cabeede oo Shiikhaal ah. Geelaas wax ka caano badan malahan ayaa la igu yiri anigu ma lisin waa sidii la ii sheegay.
Magaalada dhanka qorrax u dhaca waxaa ka xiga ayraboorka. Waa dhul ciid guduud ah. Waxaa kasii shisheeya ayraboorka dhul aad u ballaaran oo gaara illaa iyo Kulbiyow meesha lagu magacaabo. Waa dhul hawd ah, waxaa looga faa’iidaysan karaa beero. Waxaa kaloo looga faa’iidaysan karaa ama haddaba daggan xoolaha nool. Waa dhul istaraatiiji ah oo haddaad dhex gasho aan si sahlan laguu soo helayn.
Kismaanyo dhankeeda waqooyi galbeed waxaa ka xiga dhul asaguna hawd ah. Waa dhul-beereed. Waxaa kaloo aad u daggan ama ku badan geela, lo’da iyo ariga. Waxaa ku aaddan magaalooyin dhawr ah sida Afmadow, Qooqaani iyo Libooya oo xuduudda Keenya ku taalla. Dhulkaas oo dhan waa dhulka ay aad ugu badan tahay lo’da guduudan oo ay dhaqdaan reer Waamuhu. Kismaanyo waxaa hoosyimaada tuulooyin aad u badan oo dhan walba ka xiga. Waxay leedahay magaaladu xaddaarad ganacsi oo gabowday.
Magaalada waxaan uga sheekaynayaa ahmiyadda ay u leedahay Islaamka. Waxaan kaloo uga sheekaynayaa loollanka ay soo martay magaaladu iyo sida hadda loogu taahayo gaal iyo Muslimba. Rag baan seexan oo habeenkii ku qarwa, waa Barre Hiiraale iyo Moorgan.
Gaaladu danbay ka leedahay, hoggaamiya-kooxeedkuna dan buu ka leeyahay, Islaamkuna dan buu ka leeyahay Ilaahayna dan buu ka leeyahay. Waa loollanka Kismaanyo.
Ilaahay dan buu ka leeyahay oo wuu isku kaaya imtixaanayaa. Kee baa xaq wada oo Kitaabka Alle koryeelaya keebaase baadil wada oo hebel kor yeelaya? Ilaahay wuxuu makansiin magaalada ninkuu doono. Wuxuu gacanta u galin qofkii waddada xaqa ah ku socda oo Kitaabka Alle koryeelaya. Tan Allaana fuli oo xaqiiqadu ku dambayn doontaa.
Islaamku dan buu ka leeyahay Kismaanyo ama Shabaabku. Waxay rabaan inay Ilaahay ku raalligaliyaan qabsashada magaalada, waxay rabaan inay shareecada Alle ku oogaan Kismaanyo dhexdeeda. Waxay rabaan inay ugu khidmeeyaan bulshada Muslimiinta ah ee gaajada iyo colaaddu baabbi’isay. Waxay rabaan inay shirkiga iyo ehelkiisa ka nadiifiyaan magaalada oo ay ku baddalaan Tawxiid iyo ehelkiisii.
Hoggaamiya-kooxeedku dan buu ka leeyahay. Wuxuu rabaa inuu gaalo ku raalligaliyo. Wuxuu rabaa inuu Islaamka kula dagaallamo oo aan diinta Islaamku cizzi yeelan. Wuxuu rabaa in asagu yeesho cizziga iyo sharafta oo asaga loo hoggaansamo. Wuxuu rabaa in faaxishada iyo zinadu ku dhex faafto bulshada Muslimiinta ah oo nadiifka ah. Wuxuu rabaa in la yiraahdo hebel baa magaaladaas xoog ku haysta oo loo mari la’yahay (faan iyo i arkaay).
Gaaladu dan bay ka leedahay Kismaanyo. Waxay rabaan inay bulshada Muslimiinta ah ku dhex faafiyaan gaalnimo iyo ilxaad. Waxay rabaan inay boobaan hantida dhulka Muslimiinta ku dhexjirta oo ay ka caajiseen inay lasoo baxaan. Waxay rabaan in uusan xoog yeelan ama soo muuqan dhaqanka iyo ilbaxnimada Islaamku. Waxay rabaan inay la dagaallamaan ku-dhaqanka shareecada Islaamka oo ayagu ay u arkayaan mid kahor-istaagaysa dhaqankooda xun oo ay faafinayaan oo usocon la’ (gaalnimo)
Akhristayaalow waxaan rabaa in aannaan kala harin. Magaalada sheekadeeda waxaa iigu waawayn saddex arrimood:
Waa magaaladii koowaad oo loo diiday inay maamulkeeda qabtaan Ictisaam.
Waa meeshii koowaad oo odayaashii ama culumadii jihaad-diidka ahaa lagu yiri maya idinka yeeli mayno inaan hubka dhigno ama kala dirno maamul Islaami ah oo aan samaynay.
Waxaa lagu galay dagaallo lagu hoobtay oo marna mujaahidiinta laga qabsanayay marna ay qabsanayeen ayagu. Waxaad xasuusataan maalmaha qaarkood oo ay ku ciidayeen mujaahidiintu. Waxaa amiirul mu’miniin ahaa oo dadka salaadda tujinayay jaasuuskii Shariif Murtad.
Waxaa qiyaadada kamid ahaa jaasuuskii kale oo lagu magacaabi jiray Axmed Madoobe oo markii dambana diyaaradaha kusoo hoggaaminayay. Waxaa Ilaahay kala saaray khabiithkii iyo saalixii. Ikhwaanii mujaahidiintu maalinkaas laga billaabo waxay ku jireen inay dib wax u saxaan. Waxay billaabeen inay hoos isu fiiriyaan, yaa ku dhexjira oo aan daacad ka ahayn camalkaan jihaadiga ah. Waxay galeen loollan ama lagdan dheer oo ay ku sifaynayaan saaxada ay ka buuxsantay abeesooyinka dhogorta Islaamka leh. Waxaa dhammaaday albaabka iga fura waxaan ahay sheekh hebel oo wada lacagtii ama mushaarkii ciidanka, waxyaabihii nalooga faa’iidaystay ayay kamid ahayd.
Waxay talosaarteen Ilaahay. Waxay iska ilaaliyeen lacag shisheeye laga keenay oo khayaamo dabasocoto. Waxay iska ilaaliyeen hay’adihii sirtooda gudbin jiray oo watay magaca khayriga. Waxay iclaamiyeen jihaad ka dhan ah gaalada iyo wixii taageersan oo dhan, Soomaali ha ahaado ama gaalo ha ahaado. Waxay soo dhawaysteen ama walaallo ka dhigteen cid kasta oo ku garabtaagan in lagu jihaado gaalada manhajkooduna yahay manhajkii Salafu Saalix.
Waxaa kala go’ay mujaahidiintii iyo gaaladii. Waxaa kala go’ay murtaddiintii gaalada u shaqaynaysay iyo mujaahidiintii. Waxaa kala go’ay qabiil adeegsigii ama qabyaaladdii iyo mujaahidiintii. Waxaa kala go’ay culumadii shalay mujaahidiinta ammaanaysay oo hoggaanka u hayay iyo mujaahidiintii! Maxaa dhacay?
Muslimiinay waxaan dhagahayaga ku maqalnaa har iyo habeenba in la leeyahay culumadii baa wax laga maqli waayay. Ummadda Soomaaliyeed kama liidato ummadaha adduunwaynaha ku dhaqan oo Muslimiin iyo gaalaba leh. Waxay leeyihiin cillad ka reebtay caalamka, cilladduna waa tan: Khabar bay maqlayaan ama wadaad ha sheego ama mid aan wadaad ahayn. Kii warka maqlay intuu warkaan raadin lahaa xaqiiqadiisa ayuu markiiba wuxuu leeyahay waa qoladee qofka warkaan sheegay? Hadduu noqon waayo qoladiisii qofka warkaan sheegay daaqadduu ka tuurayaa warkii loo sheegay xitaa hadduu yahay Qur’aan ama nusuus cad cad. Taasi waxay na dhaxalsiisay inaan ka tagno caddaaladdii iyo xikmaddii Qur’aanku na farayay. Ilaahay wuxuu Qur’aanka ku leeyahay ama ku ammaanayaa kuwa hadalka dhagaysta kadibna qaata kiisa fiican. Dadka sidaas yeela ayaa ah kuwa Ilaahay hanuuniyay caqligana u saaxiibka ah. Haddaadan saas yeelin oo aadan warkii kuu yimaada kala saarin kiisa xun iyo kiisa fiican oo aadan xaqiijin khabarku wuxuu xambaarsan yahay ogow qolaad u rarantahay baadina waad ku sugantahay.
Akhristayaal waxaan joognaa ka gungaariddii qormadaan iyo dantaan ka lahaa taariikhdaan gaaban oo aan ugu magacdaray Masoo Gaadhay Gaal iyo Wadaad Gaadh u Wada Taagan. Waxaan ku iftiiminayay qormadaan labada arrimood oo ka kooban:
Dulmiga laga galay iyo burburka loo gaystay mujaahidiintii Geeska Afrika gaar ahaan kuwii Soomaaliya.
Beenta iyo xasadka is-huwan oo laga fidinayo mujaahidiinta oo ay ka fidinayaan culumadoodii ama culumadii Soomaaliyeed ee ayagu u arkay in jihaadku yahay dib-u-dhac iyo khasaare aan bulshada horumar gaarsiinayn dadkiina ku dhammaadeen siday ayaga la tahay ama ay muujiyen.
Waxaan labadaan qodob ku faahfaahin doonaa inshaa Allaahu tacaalaa qormadeenna soo socota. Waxaan rabaa inaad dib u muraajacaysaan ama u xasuusataan intii dhibaato loo gaystay mujaahidiinta. Waxaad il naxariis leh ku eegtaan inta noo joogta ilmo agoon ah oo aabbohood Al-Itixaad ama Ictisaam ay dagaalgaliyeen ama jihaad ugu yeereen. Xasuusta intay imaarad Islaami ah burburiyeen. Xasuusta inay mujaahidiinta iyo culumadu wadasocdeen Kismaanyo ka hor!
Intaan isku soo laabanayno wax badan maskaxdiina kusii aruuriya. Waxaad u diyaargarowdaan inaan kala xukunno raggaan oo aan garab siinno kuwooda saxan kan khaldanna aan u nasiixayno. Malafyadii qawaacidda xukunka sii akhriya. Waxaan la hadlayaa waa dadka maskaxdooda xorta u ah! Qofkii maskaxdiisa la maamulo nasiib kuma lahan gartaan qaadisteeda iyo ka runsheegiddeeda toona.
Fiiro Gaar ah: Waxaan qormada soo socota ku iftiimindoonnaa inshaa Allaahu waxqabadkii Maxaakimul Islaami ee Shariif madaxda ka ahaa iyo dagaalladay la gashay Itoobiya iyo murtaddiintii la socotay kuwoodii ugu waawaynaa.
Walaalayaal waxaan kala tagnay ayada oo farta wadnaha lagu hayo oo laga cabsi qabo in dagaal ka qarxo magaalada Muqdisho, dagaalkaas oo u dhexeeya Midowgii Maxaakimta Islaamiga iyo hoggaamiye-kooxeedyadii Muqdisho oo u arkay in kuraastoodii ay khatari ku jirto.
Magaalada Muqdisho waji kale ayey gashay, waxaa soo muuqda dagaal ka duwan dagaalladii ay horay u yaqaanneen shacabka Soomaaliyeed, waa dagaal diineed, oo lagu dagaallamayo caqiido iyo diin.
18kii bishii 2aad ee 2006dii goor barqo ah ayaa xarunta uu magaalada Muqdisho ka dagganaa Maxamed Qanyare Afrax ee Dayniile looga dhawaaqay isbahaysi ay ku midoobeen dagaal-oogayaashii Muqdisho, isbahaysigaas waxaa lagu magacaabay Isbahaysiga la-Dagaalanka Argaggixisada. Isbahaysigaan oo markii hore ay ku dhawaaqeen sagaal dagaal-ooge ayaa markii dambe sii ballaartay oo gaaray illaa 11 dagaal-ooge. Sagaalkii dagaal ooge ee Dayniile kaga dhawaaqay isbahaysiga waxay kala ahaayeen:
Muuse Suudi Yalaxow
Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Finish)
Bootaan Ciise Caalim
Bashiir Raage Shiiraar
Cabdirashiid Shire Il-Qeyte (waxaa matalayey wiilkiisa Cabdifataax)
Cabdi Shukri Cali Xirsi
Cabdi Nuure Siyaad (Cabdi Waal)
Ciise Cismaan Cali
Maxamed Cumar Xabeeb (Maxamed Dheere)
Cabdi Cawaale Qaybdiid
Labadaan hoggaamiye-kooxeed ee dambe ayaa maalmo yar kadib kusoo biiray isbahaysigaan.
Dagaal-oogayaashaan ayaa warbaahinta la hadlay isla maalintii ay ku dhawaaqeen isbahaysigaan, waxaana isla maalintaas billawday dagaal ballaaran oo u dhexeeya Midowgii Maxaakimta Islaamiga iyo isbahaysigaan ay dhisitaankiisa ka dambeeyeen sirdoonka Maraykanka Sii.Ay.Ee iyo midka Tigreega.
Waxaa isla maalintaasba hadlay oo war siiyay saxaafadda guddoomiyihii golaha Maxaakiimta Islaamka Shariif Sheekh Axmed oo sheegay inay dagaal kaga hortagi doonaan “isbahaysiga sharta iyo sheydaanka, inshaa Allaah wey jabi doonaan iyagaana ka shallayn doona, waana Ashahaado-la-dirir.”
Dagaalkii ayaa kululaaday, magaalada Muqdisho oo dhan ayuu dagaalkii saameeyey, maalintii hore waxaa la riixay oo goobohoodii laga durkiyey Maxaakimtii. Dagaalkii wuu fiday oo wuxuu gaaray bannaanka magaalada Muqdisho. Waxaa la qabsaday dakaddii Ceel Macaan, waxaa gacanta lagu dhigay eeraboorkii Cisaleey, waxaa labadaan gooboodba gacanta ku hayey ganacsade Bisheer Raage Shiiraar.
Maalinba maalinta ka dambaysa dagaal-oogayaashii mid mid ayaa xooggoodii loo wiiqayey. Kooxdii Baydhaba fadhiday dagaalladaan way ka hadleen, waxay ku sheegaan ayey garan waayeen, Cali Maxamed Geeddi oo ahaa Ra’iisul Wasaaraha xukuumaddii Cabdillaahi Yuusuf wuu kala hadlay, mar wuxuu dagaalladaan ku sheegay inay yihiin dagaallo u dhexeeya shacabka reer Muqdisho, ururrada bulshada iyo Maxaakimta Islaamiga ah oo dhinac ah iyo hoggaamiye-kooxeed dawladdiisa ka tirsan oo gadoodsan dhibaatana ku hayey shacabka. [Dhageyso]
29kii Maarso mar ay saxaafaddu wax ka weydiisay dagaallada Muqdishio ka socda waxa uu ku sheegay inuu yahay dagaal loogasoo horjeedo argaggixisada caalamiga ah dawladdiisuna ay safka hore uga jirto. [Dhageyso]
Bashiir Raage Shiiraar oo Bii.Bii.Sii-da la hadlay ayaa sheegay in isbahaysigooda ay soo dhiseen Intarbool-ku (Booliska Dawliga). Wuxuu sheegay in loo xilsaaray inay argaggixisada Soomaaliya joogta ay soo qabqabtaan, waxaa uu sheegay in dagaalku uu socon doono inta ay hawshoodaas qabsanayaan, Warbaahinta Soomaaliyeed wuxuu u sheegay in isbahaysigaani uu la dagaallamayo wax uu ku sheegay aragtida Wahaabiyada dalkeenna loosoo waariday.
Ikhwaanii ugu dambayntii waxaa laga adkaaday oo Ilaahay hoojiyay sagaalkii nin oo Islaamka la-dagaallankiisa isusoo bahaysatay. Waxaa godadkoodii loogu galay abeesooyinkii suntan lagasoo qaadan jiray. Waxaa la burburiyay qalcadihii murtaddiintu ku dhuumanayeen. Waxaa la qabsaday eeraboorradii laga dhoofin jiray mujaahidiinta, sida kii Cisaleey iyo kii Dayniile. Waxaa xididdada loo siibay jawaasiistii akhbaarta gudbin jirtay.
Waxaa la qabtay raggii shaqadaan oo dhan hawlwadeenka ka ahaa. Waxaa la helay sir culus oo anfacday ducaadda illaa iyo maanta. Waxaa mid mid loo siibay balaayadii nagu dhex jirtay oo la ogaaday ama laga helay Sii.Ay.Ee-da jihaazkeedii ama kumbyuutarkeedii. Magaaladii Xamar ayaa maalmo yar waxay noqotay meel aamin ah oo laga waayay cid dulmisa cid kale. Waxaa la raacdaystay oo gobollada looga dabatagay fiiggii ka haray murtaddiintii Xamar laga eryay.
Billawgii bishii lixaad (Juun) ee sanadkii 2006dii ayey Maxaakimtu gacanta ku dhigeen oo xoreeyeen guud ahaan magaalada Muqdisho. Waxaa la gaaray xilligii macruufka noqday ee ahaa Maxaakimtii iyo lixdii bilood ee Xamar. Waxaa la ballaariyey haykal dhismeedkii Maxaakimta, waxaa laga dhigay Midowga Maxaakimta Soomaaliyeed halka markii hore ay ka ahayd Midowga Maxaakimta Muqdisho. Waxaana midowgaas kusoo biiray maxaakim kale oo laga aasaasay gobollada dalka Soomaaliyeed.
Ayadoo aan dagaalkii dhammaan oo dhalinyaradu ku mashquulsan yihiin sugidda ammaanka ayaa waxaa caalamka isaga kala yimid odayaashii Ictisaam oo carari jiray markii guuldarro timaaddo, markii khayr iyo guul la gaarana imaan jiray ayagoo boorsooyin waawayn wata. Waxay dheheen, “Maashaa Allaahu waxaad qabateen hawl aan caadi ahayn. Murtaddiintiina waad ku saxnaydeen inaad ku jihaaddaan waxayna ahaayeen gaalo Ilaahay diintiisii dagaal kala hor yimid! Nagusoo wareejiya maamulka annaga odayaasha ah, maxaa yeelay adinku wax ma maamuli kartaan mana taqaannaan si wax loo maamulo. Hawshaanu waa hawl wayn oo u baahan fiqhi iyo axkaam daqiiq ah. Aad ayaadna ugu mahadsantihiin murtaddiintii aad magaalada ka saarteen, dhiiggooduna waa hadur oo waxay ahaayeen murtaddiin.” Waa fatwadii shalay laga waayay ama ay diideen markii loo baahnaa, way lasoo daaheen. Gabar xun ma ihiye, beer baas ayaan leeyahay!
Waxaa la galay xiwaar dheer. Dhalinyarada waxaa ku jira beer baas oo aan maya aqoon. Laakiin waxaa galay shaki fara badan oo sidoodii hore ma ahan. Waxay daaqadda ka saareen afraaddii ay ku yaqaanneen khayaamada iyo inay maalin walba burburin jireen waxay soo dhisaanba. Waxay soo dhawaysteen qolo cusub oo soo huwatay haybad wadaad ama la yimid dhaqan mujaahid.
Raggaas lagu kadsoomay waxaa kamid ahaa Janaqow iyo saaxiibbadiis. Wax la tirin karo ma ahayn ragga ducaadda u ekaa ama wadaad wanaagsan la moodayay, markii dambana lasoo baxay dhaqankiisii dhabta ahaa. Waxay dhalinyaradu aamineen rag culumo waawayn ahaa oo diintaan in badan kusoo dhex jiray. Waxay hawshii ku wareejiyeen dad ay u qabeen inay ehel u yihiin xag diineed iyo xag maamul intaba.
Dhalinyarada ujeeddadeedu waxay ahayd in la helo dawlad Islaami ah oo dadka u khidmaysa. Waxay dhalinyaradu ka dhiidhiyeen culumada la dhoofinayo sidii arigii. Waxay diyaar u ahaayeen inay askar noqdaan oo gaalada la dagaallamaan maamulkana ay qabtaan ciddii ehel u ah. Waxaa dhici karta in ayaga laga dhex helo cid maamulka ku wanaagsan, waxaa dhici karta inay bulshada dhexdeeda ka yimaadaan dad aqoon u leh maamul wanaag, aqoonna u leh shareecada Islaamka iyo axkaamteeda.
Ducaaddu waligood kuma ay fakarin wixii dhacay oo ay sameeyeen raggii la aaminay oo loo dhiibay dawladdii Islaamka ahayd oo dhiigga badanu ku daatay. Dhalinyaradu waxay ku baraarugeen odayaashii Ictisaam qaar kamid ah oo ay dareemeen luggooyada ay ku hayeen jihaadka iyo raggii waday. Dhalinyaradu meeshaba masoo dhigan bulsho dhan oo khayaamo lasoo taagan ama Alle ka-fogaansho in yar oo Ilaahay u naxariistay mooyee. Waxay gaaladu ku adeeganaysaa culumadii, aqoonyahankii, iyo odayaashii intii Ilaahay u naxariistay mooyee. Yaa la aaminaa?
Dhismihii Dawladdii Maxaakimul Islaami ee Xamar
Waxaa la galay shir wayn oo lagu falanqaynayay qaabkii loo hoggaamin lahaa dawladdaan iyo ciddii hoggaamin lahayd. Waxaa yimid kooxo xukun-doon ah oo qola walbaa leedahay annagaa xaq u leh qabashada hoggaanka.
Kooxahaas waxaa kamid ahaa Ictisaam oo u qabay inay dadka ka xigaan dhismaha dawladdaan iyo hoggaaminteeda. Waxaa kamid ahaa odayaasha Hawiye oo ku doodayay annagaa xaq u leh hoggaaminta dawladdaan Xamar ka dhalatay. Waxaa kamid ahaa ururrada bulshada oo waxaas oo dhan u arkayey inay ayagu ka sarreeyaan cid walba oo ay yihiin aqoonyahannadii ummadda hoggaamin lahaa xaqna ay u leeyihiin hoggaaminta dawladdaan.
Muddaa la is mari waayay. Waxaa kala jabay Ictisaam. Waxaa geeska la galiyay odayaashii Ictisaam oo aan ahayn Hawiye siday ayaga la ahayd ama dhismaha dawladda ka muuqatay. Dhalinyaradu markay arkeen sida xukunka loo jecel yahay oo loogu xisaabtamayo ayay dib isu qabteen oo waxay go’aansadeen inay askar ahaadaan oo furinta galaan ciddii hoggaanka qabanaysana ay ku addeecaan.
Ugu dambayn waxaa la dhisay maamul uu madax u yahay Shariif Murtad Karazaay. Wuxuu ahaa balaayo nalagusoo darsaday oo aan laga warqabin. Wuxuu ahaa jaasuus ama kadib ayuu aqbalay inuu jaasuus noqdo. Waxaa la shaqaynayay kuwo asaga shaqada ugasoo horreeyay oo aan war laga hayn (jawaasiis). Waxaa la gudagalay inay shaqayso imaaradaan Islaamiga ahayd oo Xamar dhidibbada loogu aasay.
Ma dhammaan dagaalkii lagula jiray hoggaamiya-kooxeedyadii. Maalin walbaa magaalaa laga qabsadaa mooryaantii. Markii magaalada la qabto ayaa maamulkii la dhisay oo dawladdu lahayd wuxuu u magacaabaa magaaladii la qabtay mooryaan qabiilka meesha daggan ka tirsan. Dhalinyaradii way shakiyeen markay arkeen ninkaan ay yaqaannaan oo mooryaanka ah ama qabiilku ka buuxo oo loo dhiibay magaaladay ka qabsadeen mooryaanta.
Maamulka dawladda markay waydiiyaan khaladka ay arkeen waxaa lagu yiraahdaa maslaxada dacwada ayaa ku jirta sidaan. Way iska aamusaan ayagoo arka dhibaatada jirta. Waxaa layaab ah mooryaan ka xoree oo mooryaan u dhiib. Waxaa dhacay dhacdooyin waawayn oo u baahan in buugaag laga qoro. Anigu waxaan tooshka ku shidayaa ama iftiiminayaa ciddii mas’uulka ka ahayd wixii dhacay iyo khayaamadii loo gaystay ummadda Soomaaliyeed iyo ducaaddii diinta u adeegaysay. Waxaan rajaynayaa inay u istaagaan raggii xog-ogaalka ahaa oo ay diiwaan galiyaan taariikhdaan soo martay ummadda Soomaaliyeed. Ugu dambayn waxaa dhacay dagaallo waawayn oo lagu hoobtay.
Waxaa xasuus mudan in laga sheekeeyo hoggaankii sare ee dawladdii Islaamiga ahayd. Waxaa madaxwayne ka ahaa Shariif Sheekh Axmed. Maxaad ka malaysanaysaan dawladda madaxwayneheedii iyo wasiirkii gaashaandhiggu ay jawaasiista yihiin? Imisa jaasuus ayaa ku dhex jirtay? Ilaahay bay u xisaabsanaayeen waxaanse u malaynayaa inay ahaayeen ciidamo dhan. Allaahumma sallim, sallim. Waxaa Wasiirkii Gaashaandhigga ka ahaa Yuusuf Siyaad Indhacadde.
Dhismahaan Maxaakimta loo sameeyay waxaan hubaa inay ka dambaysay gacan shisheeye ama Sii.Ay.Ee-da ha ahaato ama cid kale. Waxaana loogu tala galay in lagu fashiliyo ama looga hortago tayaarkii jihaad-doonka ahaa. Ujeeddadii gaaladu ka lahaydna waa u fushay oo waa taad ogaydeen wixii lagu falay ikhwaankii, didibtii bannaanayd wixii duubcad lagu laayay!
Dhalinyaradu waxay baraarugeen baraaruggii ugu dambeeyay. Waxay ogaadeen cidda ay hoggaanka u dhiibteen inaysan daacad ka ahayn jihaadka iyo miradhalkiisa. Waxay ku baraarugeen kuwaan cusub (Shariif Karazaay) iyo kuwii hore (odayaashii Ictisaam) inay isku mid ka yihiin. Waxay qaateen go’aankii ugu dambeeyay oo ay ku badbaadin lahaayeen dhalinyarada inta hartay iyo camalkay ku jiraan oo jihaadka ah.
Walaalayaal kama sheekaynayo dagaalkii iyo gumaadkii dhacay. Kama sheekaynayo fashilkii ku yimid dawladdii Islaamiga ahayd iyo ciddii fashilisay. Kama sheekaynayo barakicii loo gaystay bulshadii dagganayd ee ku nasatay imaaradii Islaamiga ahayd. Ma ahan in aanan dan ka lahayn oo aan xaqirayo laakiin ma siin karo xaqqeeda haddaan damco inaan ka sheekeeyo. Rag baa Ilaahay usoo saari doonaa taariikhdaas iyo diiwaan galinteeda inshaa Allaahu tacaalaa.
Waxaan rabaa inaan caddeeyo meeshii ay ku kala hareen odayaashii Ictisaam (Itixaad ahaan jiray) iyo ducaaddii ay muddada soo luggoynayeen ama soo khayaamaynayeen. Burburkaan hadda dhacay oo aan faraha kula jirno mushkiladdiisa odayaasha Ictisaam saamayn wayn bay ku leeyihiin. Waxay dhex joogaan ama lasoo xiriiraan maamulka Maxaakimta. Waxay bixin jireen talooyin iyo tawjiihaad. Afraad ayaga kamid ah waxay hayeen jagooyin muhiim ah oo imaaradu leedahay.
Qoladaan cusub oo Shariif Karazaay madaxda u yahay iyo qoladii hore ee Ictisaam waxaa ka dhexeeya isfaham xagga maamulwanaagga ayaga siday la tahay. Shariif Karazaay ma ahan nin Ictisaam ah. Waxaa kooxdiisa lagu magacaabaa Aala Shiikh. Nimankaasi ma ahan niman soo dagaallamay oo dagaal wax ka yaqaan. Waxaa macallimiin u noqday odayaashii Ictisaam oo ku gaboobay sida loo jallaafeeyo wiil yar oo qori la ordaya oo jihaad ku khafiifay siday ayaga la ahayd.
Waxay isku waafaqeen in laga fogeeyo maamulka imaarada ragga ay ku jirto ruuxda jihaadiga ah. Waxay isla gaareen qaraar ah in magaalo kasta oo mooryaanta laga xoreeyo loo dhiibo qabiilkii mooryaanta dhalay ducaaddana laga fogeeyo maamulkaas dagmadu yeelatay. Waa yaab! Markii horaba mooryaanta waxaa meesha dhigtay odayaasha qabiilka oo maamulka dagmada loo dhiibayo! Maxaa la faa’iiday? Mooryaanka iyo aabbihiis kee baa dhib badan? Aniga waxaa ila dhib yar wiilkaan yarka ah oo ay ku filan tahay marduuf qaad ah. Laakiin odayga waxaa qanciya wixii Buush qanciya.
Waxba yaanan sii fogaan. Waxaan gaadhnay magaalada Kismaanyo. Waxaa laga adkaaday kaaba-mooryaankii Kismaanyo haystay. Sidii caadada u ahayd ururkii Ictisaam ama odayaashii markii magaaladii la qabtay ayay bustahoodii soo dhigteen oo waxay dheheen u dhiiba maamulka magaalada odayaasha qabiilka meesha daga oo mooryaanta dhalay. Libaax la tag bartay ka dhig waa ku ceeb!
Dhalinyaradu qorshay wataan oo intaan magaalada lagu soo duulin ayay ka wada hadleen magaalada iyo siday ka yeelayaan haddii la qabsado. Odayaasha Ictisaamna war kama hayaan oo waa culumadii mujaahidiinta marka nasri la gaaro ama nabadda la yahay. Waxay u barteen dhaga-nuglaanta Shabaabka iyo xoog furnaantooda. Waxay odayaashu dhalinyarada ku ammaanaan inay yihiin ducaad wax ku ool ah, xagga dagaal, xagga dacwada iyo dhanka manhajka intaba.
Waxaa lagu jiraa shir ku saabsan sidii dhalinyaradu kusoo wareejin lahaayeen magaalada Kismaanyo, waxa lagu wareejinayaana waa mooryaantii la kala eryay aabbayaashood ama tolkood. Waxaa dalabkaasi ka yimid odayaashii Ictisaam oo la arki jiray marka nasri la gaaro, markii birta la iska aslayana carari jiray ama dhalinyarada eedayn jiray oo oran jiray “Adinkaa sabab u ah musiibada dhacday.” Marka wanaag la gaarana dhihi jiray “Maashaa Allaahu waxaad qabateen hawl aan caadi ahayn. Soo dhiiba maamulka.”
Ikhwaanii aan sugno shirkaas waxa kasoo baxa. Waxaa kaloo la idinka rabaa inaad ra’yigiina ku darsataan waxa laga yeelayo Kismaanyo. Ma jirto magaalo ka dambaysa Kismaanyo. Kismaanyo waxay ku taallaa ama saarantahay badda. Haddaan dhiibno ayada magaalo dambe ku xisaabtami mayno. Waxaan sugaynaa ra’yigiina inshaa Allaahu.
Waa inoo qormada dambe.
Ikhwaanii waxaan kala tagnay ayadoo maxkamadihii Islaamiga ahaa loo tashaday oo inta dawlad Karazaay ah lagusoo dhisay Carta ciidammadii iyo madaxdoodiiba la yiri waxaad tihiin dawlad. Dawladdaas waxaa madax ka ahaa Cabdi Qaasim Salaad Xasan. Waxaa loo soo sameeyey oo kaliya in lagu burburiyo Maxaakimtii Muqdisho ka hanaqaadday oo gaartay heer caalami ah ama awood muuqata yeelatay.
Ducaaddii iyo ciidamadii Maxaakimta ayagoo aan kala harin ayaa waxaa shab lagu dhexsiiyay maamulkii ay sameeyeen Maraykanka, Jabuuti iyo Itoobiya ee Carta. Markii Cabdi Qaasim la wareegay ciidammadii Maxaakimta ayaa waxaa meesha ka baxay mujaahidiintii Maxkamadaha.
Haddaad xasuusataan Maxkamadaha waxay ku labbisnaayeen tuute ay kor uga qoran tahay magac qabiil, hoostana ay uga qoran tahay Kalimatu Tawxiid. Maxkamadihii intay ducaadda gacanta ugu jireen waxay yeesheen akhlaaq diineed, waxay yeesheen tababbar ciidan, waxay yeesheen faham diineed. Waxaa la isku daray rag culumo ah iyo raggii mooryaanta soo ahaan jiray markaasay ku daydeen culumadii iyo dhaqankii fiicnaa ee ay culumada ka arkeen. Ninkii shalay mooryaanka ahaa maantay waa mujaahid.
Culumadii waxay wacdiyeen oo wax bareen dadkii diin-yaridu haysay. Waxaa muddo kadib soo baxay ciidan bidhaan Islaam leh oo kala amarqaadanaya. Waxaa soo baxay ciidamo dagaalyahan ah oo muddo mooryaan soo ahaa haddana looga faa’iidaystay ciidan ahaan inay shareecada Islaamka ximaayo u noqdaan ama ilaaliyaan.
Cabdi Qaasim dharkii buu ka baddalay Maxaakimtii. Wuxuu u galiyay dhar loosoo dhiibay oo ay ku qoran tahay Ciidammada Dawladda Cabdi Qaasim Salaad Xasan. Wuxuu ka baddalay akhlaaqdii iyo Islaam ku-dhaqankii. Wuxuu dhagta ugu sheegay inay jiraan wax badan oo soo socda oo is baddal ah. Wuxuu duufsaday ama ku kadsoomay culumo waawayn oo miisaan ku lahayd bulshada dhexdeeda oo run u maleeyay wuxuu sheegayo Ina Qaasim. Waxay u maleeyeen Carabigii uu daldalayay inuu yahay nin wadaad ah.
Cabdi Qaasim markii la ogaaday in maxkamadihii lagu burburiyay dawladdiisii ayaa asagiina la eryay illayn dan kale lagama lahayne. Wuxuu ahaa kaar la isticmaalay markii laga dhammaystayna la tuuray. Gaalo waxay diyaarsatay raggii hoggaamin lahaa ciidammadaan sida sahlan ay ugasoo dhacsatay Cabdi Qaasim iyo ducaaddii uu duufsaday ama qabiilka ku raacday Cabdi Qaasim.
Cabdi Qaasim waxa uu Taliyaha Booliiska u magacaabay Cabdi Qaybdiid halka Taliyaha Mileterigana uu u magacaabay Galaal. Labadaan nin ayaa gacanta ku hayey askartii xilli mujaahidiinta Maxaakimta ahaan jirtay meeshaanna ay keeneen sidaan soo sheegnay culimadii Itixaadka oo markaan wata magaca Ictisaam.
Ciidammadaan waxaa loo xiray shaar cusub, midkii uu Tawxiidku hoosta kaga qornaa waa laga bixiyey, waxaa loosoo diyaariyay tuute cusub ama dhar cusub. Waxaa shaarka korkiisii lagusoo qoray saddex magac: Ciidammada Dawladda ku-meel-gaarka ah, Ciidammada Maxaakimul Islaamiya, Ciidamada Ummadda Soomaaliyeed. Waxaa la rabaa ciidammadaan in lagula dagaallamo wadaaddada ku tababbarta Xamar dhexdeeda oo lasoo heli waayay saldhiggoodii iyo sirtoodii intaba.
Raggaan gaaladu raadinayso waa ragga ay ka go’an tahay raadinta dawlad Islaami ah, waa rag naftooda u huraya si loo xaqiijiyo hadafkaas, meel ay joogaan lama yaqaanno sababtuna waxay tahay Maxaakimtii Islaamiga ahayd ayey ku dhexmilnaayeen. Maxkamadihii waa laga takhallusay oo waxaa loo adeegsaday culumo iyo Karazaay Cabdi Qaasim. Waxaa hadda si toos ah loo muwaajahayn doonaa dhalinyaradii oo baalihii laga rifay ama darbigii ay ku dhuumanayeen laga dumiyay.
Waxaa xusid mudan markii lasoo gaaray 2006dii maleeshiyaadkii ay wateen hoggaamiye-kooxeedyadu oo ay kula dagaallamayeen Midowgii Maxaakimta inay ahaayeen mujaahidiintii Maxkamadihii lagu baabbi’iyey maamulkii Carta.
Maleeshiyaadkii sida kulul ula dagaallamay Midowgii Maxaakimta ee Muqdisho ee uu hoggaaminayey Cabdi Qaybdiid waxay ahaayeen mujaahidiintii hore ee Maxkamadaha ee uu u noqday taliyahooda maadaama uu ahaa Taliyaha Booliiska. Raggaas la laayey ayaga oo difaacaya Cabdi Qaybdiid kana soo horjeeday Midowgii Maxaakimta yaa heerkaas gaarsiiyey? Yaa sabab u noqday inay dhintaan ayaga oo difaacaya hoggaamiye-kooxeed? Yaa manhajkoodii baddalay? Jawaabtu waa Ictisaam iyo dhammaan culimadii ka shaqaysay in mujaahidiintii Maxkamadaha la hoos geeyo Cabdi Qaasim.
Dadka shacabka ah iyo wadaadxume oo dhan waxay u qabaan waxa socdaa inuu yahay maamul ay leedahay koonfurta Soomaaliya ama beelaha Hawiye. Waxaa dhagta loogu sheegay iska celiya nimanka waddammadoodii soo gubay oo lagu yiri Hawiye soo barakiciya! Waxaa xoogow shilimo ah la siiyay iimaanlaawe oo dhan oo waxaa la yiri qayli oo waxaad dhahdaan annaga reer hebel ah waxaan rabnaa in magaaladayada nalooga baxo, dagaal ma rabno, shisheeye ma rabno iyo wixi la mida.
Wadaaddadii casabiyadu beerka u fariisatay iyo kuwii jawaasiista ahaana waxay dadka ama bulshada ku qanciyaan “Arrintaanu waa bannaantahay oo waa masaalixu-dacwa. Nebigu (sallallaahu calayhi wasallam) wuxuu sameeyay dacwo la yiraahdo yaa qawmi, marka waa noo bannaantahay inaan annagoo qabiil ah gees ubaxno oo dadkeenna jahliga ka saarno. Waxaa kaloo xaaraam ah in qof Muslim ah oo ashahaadanaya la dilo, hadduu rabo asagu haku dilo. Qiyaame asagaa laga rabaa jawaab sababtuu kuu dilay. Adigu shahiid baad tahay! Marka walaalayaal iska dhiga hubka waxaa lagu jiraa waqti fitno. Nebigu wuxuu yiri waxaa la gaari doonaa waqti fitno. Waqtigaas asaga ah ninkii gaaraa gurigiisa ha galo. Haddii lasoo weeraro yuu gacan taagin ama iska celin qofka dilaya. Haddii naagtiisa lagu hor kufsado yuu far taagin. Hadday rabaan adiga haku kufsadeen. Isbir, isbir, isbir!”
Naagi xaggee joogtaa adaaba lagu dilay oo lagu yiri ha is difaacin! Fatwooyinkaas aad mooddo in nin waalani fatwooday oo u adeegaya gaalada oo ay buufinayeen jawaasiistii wadaaddada u ekaa oo gaalada la shaqaynayay ayaa dadkii lagu jaahwareeriyay ama shubho laga galiyay diintoodii iyo difaaca naftoodi iyo ehelkoodii intaba.
Waxay dadkii ku dul akhriyeen axaadiith aan booskeedii oollin laakiin diinta kamid ah. Waxaa lagu yiri bulshadii Muslimiinta ahayd oo u diyaargarowday inay gaalada iska dhiciso, “Amxaaradu waa dawlad, dawladna lalama dagaallami karo, Maraykanna warkiis iskaba daaya.” Waxaa lagu yiri sagaalka nin oo gaaladu ciidanka ka dhigatay oo dadka gumaadayay, waa Muslimiin walaalihiin ah ninkii xabbad ku ridaana waa takfiir, waa ehlu-Naar hadduu dhinto iyo wax la mida.
Ummadda Soomaaliyeed waa ummad aan dagaal loogu faanin oo dagaalyahan ah haddana waa ummad Muslimiin ah oo markii loo sheego wax diintooda dhaawacaya way ka istaagaan. Mushkiladda ummadda haysata oo looga faa’iidaystay waxay tahay ayagoo aan diintoodii si sax ah u baran ama fiqi-yari xagga jihaadka ka haysatay culumo iyo caamaba. Culumadu baabul jihaad waa akhriyaan laakiin qorshaha kuma ay darsan inay dhiig daadiyaan ama laga daadiyo waligood!
Shacabku waligi ma arag diin loo dagaallamayo oo naf iyo maalba lagu bixinayo. Waligood uma xanaaqin Alle dartiis iyo in diintii wax laga sheegay. Waligood masoo marin wadaad oranaya ina keena aan reer hebel ku duulno maxaa yeelay waxay diideen ku-dhaqankii shareecada Islaamka. Indhaha ma aysan saarin xuduud Islaam oo la fulinayo. Gacan la gooyo, lug la gooyo, dhagax la isku dilo, midna ma aysan arag umana qabaan inay diinta kamid tahay. Laakiin waa jirtaaye waa laga qariyay. Markaasay qariibsadeen qoladaan tuugga gacanta goynaysa. Waxay qariibsadeen kuwa dhillaysta oo meherka soo maray in dhagax lagu dilo.
Waxay yaqaanneen bulshad Soomaaliyeed dagaal sokeeye oo ay ogaayeen inuu xaaraam yahay. Waxaa la safnaa oo ku garabtaagnaa dagaalkaas sokeeyaha oo xaaraamta ah culumadoodii diinta soo bartay. Waxay dhihi jireen culumadu markay rabaan in reer hebel lagu duulo, “Waxaa idiin bannaan dhiigga reer hebel maxaa yeelay way idin dulmiyeen dulmiguna ma bannaana. Dagaalkaas ninkii ku dhintaa wuxuu ku dhintay jihaad oo wuxuu difaacayay naftiisa iyo cirdigiisa. Wuxuu difacayay maalkiisa!”
Cajaa’ib. Tigree ma bannaana in la iska dhiciyaa oo waa dawlad, dagaalkooduna waa fitno! Kaaba mooryaanka ma bannaana in la iska dhiciyaa oo waa Muslim waana fitno in lala dagaallamaa! Hawiye, Daarood, Dir iyo Adaris waa bannaan tahay in la iska dhiciyo oo waa lagu jihaadi karaa! Ka warrama fiqigaas? Saas waxa qaba nimanka ama culumada la baxday Ehlu Sunna wal Jamaaca iyo Ictisaam intooda xun oo gaalada jawaasiista u ah.
Akhristayaalow waxaa billawday mashruucii fayskiisii labaad oo gaaladu ugu talagashay in lagu ciribtiro mujaahidiinta intay curdanka yihiin. Waxaa la ugaarsaday afraaddii waxtarka ahayd, waxaa nolol lagu dhiibaa maalin kasta culumo si qarsoodi ah loo qabqabto. Waxaa toogasho lagu dilaa ninkii ama wadaadkii nolol lagu qaban waayo. Waad xasuusataan inta Shiikh Xasan Daahir la dhaawacay.
Waxaa la dilay ducaad qaali ahayd. Waxaa kamid ahaa Shiikh Cabdullaahi Sahal taqabbalahullaahu. Waxaa la dhoofiyay sidii arigii raggii ama ducaaddii Xamar joogtay ama gobollada joogay oo aan hubaysnayn. Waxaa xabsiyada laga buuxiyay mu’miniintii Ilaahay naftooda ka iibsaday. Waxaa lasoo weeraray oo hanjabaad loogu daray kooxdii hubaysnayd. Waxaa lagu wargaliyay inay isdhiibaan ama ka baxaan carro Hawiye ama gobollada koonfureed oo Hawiye ka taliyo.
Dhalinyaradii markii godkoodii biyo ugu soo galeen ayay la tashadeen culumadoodii. Waxay dheheen tala keena waxaad arkaysaan ayaa dhacaya. Waxaa la idiinka baahan yahay laba arrimood:
Inaad nimankaan murtaddiinta ah oo ducaaddii iibsanaya fatwo kasoo saartaan lagula dagaallamo.
Inaad dagaalka nala gashaan arrintaan ma dhawran karnee.
Al-Ictisaam labadii arrimood maya iyo haa midna ma dhihin. Way ku kala aragti duwanaayeen la dagaallanka hoggaamiye-kooxeedyada. Rag waxay qabeen in lala dagaali karo ragna waxay qabeen inaan far la saari karin oo ay tolkood yihiin ama Muslimiin. Mar haddii fatwo laga waayay waxaan laga sugayn ciidan inay keenaan. Aamus ayey ku jawaabeen al-Ictisaam. Dhalinyaradii go’aan bay gaareen. Ilaahay bay talasaarteen. Waxay galeen diyaargarow.
Waxaa dhacay weerarradii lagu qaaday Maraykanka 11kii Sibtembar. Magaalada Muqdisho waxaa ka billawday dagaal hoose oo u dhexeeyey dhalinyaradii shareeco-doonka ahayd iyo hoggaamiye-kooxeedyadii Muqdisho, waxaa si cad usoo muuqday dawrka ay dagaalladaas ku lahaayeen sirdoonka Tigreega iyo midka Maraykanka iyo guud ahaanba midka reer Galbeedka, waxaa magaalada Muqdisho ka billawday iqtiyaalaad iyo is-ugaarsi, Dagaalkaasi wuxuu ahaa wadaamaysi, mar mar dhalinyarada mujaahidiinta ah wax baa laga dili jiray mar marna ayaga ayaa cadawga ka il heli jiray.
Dawladdii Cabdi Qaasim waa la baddalay, waxaa madaxweyne loosoo doortay Cabdillaahi Yuusuf. Dagaal hoosaadkii Xamar waa sii kululaaday. Cabdillaahi Yuusuf inuu Xamar tago wuu diiday. Waxaa billawday khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyey xubnihii dawladdii Cabdillaahi Yuusuf. Hoggaamiye-kooxeedkii dagaalka hoose kula jiray dhalinyarada waxay isku baddaleen wasiirro kamid ah dawladdii Cabdillaahi Yuusuf.
Waxaa mar labaad dib usoo bidhaamay Maxaakimtii Islaamiga ahayd, Maxaakimtana waxay ku salaysan yihiin qabiil, qabiil walbaana waxa uu samaystay Maxkamad Islaami ah oo u istaagta danaha qabiilka, oday-dhaqameedyadii hoggaaminaysay qabiilka waxay ogaadeen in hoggaamiye-kooxeedkoodu uusan qabiilka wax aan dhib ahayn u keenayn, sidaas daraaddeed wiilashoodii waxay ku biiriyeen Maxaakimtii si shareecada Islaamka loogu kala baxo.
Maxaakimtii waxay ku fideen magaalada Muqdisho, xaafad walbaana waxaa laga hirgaliyey Maxkamad Islaami ah oo wadata magaca qabiilka, Dhalinyaradii shareeca-doonka ahaa waxay ku biireen Maxaakimtaas Islaamiga ah ee huwan magaca qabiilka, waxay dawr weyn ku lahaayeen habdhiska ciidan ee Maxkamadahaas, waxay fulinayeen hawlaha aan ciidanaka looga maarmin ee ay Maxkamaddu u baahan tahay.
Waxaa cirka iksu shareeray cabdisii ay reer Galbeedku ka qabeen Maxkamadaha Islaamiga ah oo ay hoosta uga naban yihiin dhalinyarada shareeco-doonka ah, Maxkamadihiina dhankooda waxay billaabeen inay isnidaamiyaan.
Markii uu sii kululaaday ugaarsigii ka dhexeeyey dhalinyaradii mujaahidiinta ahaa iyo sirdoonka Tigreega iyo reer Galbeedka oo ay wakiil u yihiin hoggaamiye-kooxeedyadu ayey ururkii Ictisaamku waxay si cad bari uga noqdeen dhalinyaradii, shirar ayey iskugu yimaadeen waxayna soo saareen baaqyo ay ku sheegayaan inaysan dhalinyaradu ayaga ka amarqaadan hoosna imaan.
Ictisaam wuxuu uga gol lahaa arrinkaas inuu iska fogeeyo dagaal hoosaadka Muqdisho ka socda, iyo in reer Galbeedku aysan usoo raacan Ictisaam wixii dhib ah ee loo geysto.
2005tii waxaa midoobay Maxkamadihii Islaamiga ahaa ee ku salaysnaa qabiilka. Waxaa loo bixiyey Midowga Maxkamadaha Islaamiga ah ee Muqdisho, waxaa madax looga dhigay Shariif Shiikh Axmed, waxaana ay yeesheeen hoggaan mid ah oo dhammaantood mideeya.
Waxay billaabeen Maxkamaduhu inay magaalada Muqdisho inta ay ka awoodaan ka sifeeyaan munkaraadka iyo waxyaalaha xun xun, waxay dadkii fareen wanaagga iyo kheyrka in loo tartamo, xumaantana ay ka fogaadaan. Waxaa mararka qaarkood dhici jiray isku dhacyo kooban oo dhex mara Maxaakimta iyo hoggaamiye-kooxeedyada, halka dhanka kalena uu taagnaa khilaaf weyn oo u dhexeeya hoggaamiye-kooxeedyadaan wasiirrada noqday iyo madaxweynahooda Cabdillaahi Yuusuf, khilaafkaas oo sababay inay laba qaybood ukala jabaan oo qaybina Xamar saldhig ka dhigato qaybna Jawhar ay dagaan.
Dagaal hoosaadkii ayaa sii kululaaday, waxaana bannaanka usoo baxday khatarta ka imaan karta Midowga Maxkamadaha Islaamiga ah ee doonaya inay shacabka Soomaaliyeed ka saaraan dhibka iyo mashaakillada haystay shacabkaan muddada dheer.
Illaa laga soo gaaray 18kii Febraayo 2006dii maxaa dhacay? Maxaa isbaddalay? Maxaa soo cusboonaaday?
Waxayna uga hadli doonnaa inshaa Allaahu qormada dambe.